ED Recovery Stories7- သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် - ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားနိုင်သည်
ED Recovery Stories7သည်အကောင့်တိုတောင်းသောစာမျက်နှာ ၈ မျက်နှာပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကြာကြာအဘို့, အသေးစိတ် ED အကောင့်ကိုမြင်ရ Rebooting Accounts ကို နှင့် ပြင်ပ Rebooting ဘလော့ဂ်များနှင့် Threads
ယောက်ျားတွေမင်္ဂလာပါ… .. ဒါကဒီ site ကိုပထမဆုံးဘလော့ဂ်ပါ။ ဒီနေ့ M ကိုပြန်သွားပြီး ၈ ပတ်ကြာအောင်ငါပြီးသွားပြီ။ ငါ့ရဲ့သမိုင်းအကျဉ်း ... ကျွန်ုပ်သည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအသက် ၂၈ နှစ်ရှိအမျိုးသားဖြစ်သည်။ ငါဟာအမြဲတမ်းမြင့်မားတဲ့လိင်မှုကိစ္စရှိတယ်။ ငါဘယ်တော့မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေမှာဘယ်တော့မှမပါဝင်ခဲ့ဘူး၊ ၁.၅ နှစ်နီးပါးမတိုင်မီကျွန်ုပ်နေ့စဉ် M နီးပါးကိုလုပ်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် broadband ဆက်သွယ်မှုကိုယူဆောင်လာသည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ငါအစွန်းရောက် porn မြင်ကွင်းများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့် "M" ... .28 လလုပ်ဖို့အသုံးပြုလေ့ရှိတယ်ငါချိတ်ဆက်တယ် ... ရောဂါလက္ခဏာများ
လိင်စိတ်-နီးပါးသုည, မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ကဖွင့်မရ။ M ကသို့မဟုတ် P. ရန်မတိုက်တွန်း
မောပန်းခြင်း-ငါနီးပါး cud 15 မိနစ် (ပုံကြီးချဲ့ပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့ကြည့်ခြင်း) ထက်ပိုပြီးမခံမရပ်
အစဉ်မပြတ်ငါကိုအာရုံအတွက်ဦးနှောက်မြူနှင့်အခက်အခဲရှိခဲ့ပါတယ် fog- ဦးနှောက်။
အနိမျ့ဘာမှလုပ်ဖို့အဘယ်သူမျှမအလိုဆန္ဒ motivation- ။
ငါလုံးဝတက်ကြွခဲ့သည်, ဤအကြောင်းပြချက်ရှာမခံခဲ့ရပါဘူး။ မကြာသေးမီကဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ထံကျွန်တော်လာရောက်ခဲ့ပြီးသူမသည်ဗီတာမင်ဘီနည်းနည်းအကြံဥာဏ်ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဗီတာမင်ဘီ (၅) ဆေးထိုးခြင်းသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ငါဟာဘဝမှာစွမ်းအင်များစွာနဲ့အမြဲစိတ်အားထက်သန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါခံစားခဲ့ရတာကငါ့ရဲ့စွမ်းအင်ကိုလုံးဝ“ နို့စို့” နဲ့“ ဝိညာဉ်” မပါတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျက်စီးစေတဲ့အခြေအနေနောက်ကွယ်ကအကြောင်းပြချက်မရတဲ့အတွက်ဒါဟာတကယ့်ကိုဘဝအတွက်ကမောက်ကမဖြစ်မှုပဲ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ခဲ့တယ်။ တစ်နေ့ surfing net မှာ YBOP site ကိုရတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ PORN ကကျွန်တော့်ကိုဘာမှမသတ်ဘဲသတ်ပစ်ခဲ့သည် .. Broadband net connection မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက် .... ဘဝသည်တစ်နှစ်မပြည့်သေးသောကာလဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုပျက်စီးစေခဲ့သည်။ ငါ PMO မပါဘဲ 1 ပတ်ကြာမှစတင်ခဲ့ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်, ယနေ့ငါ 8 ပတ်ပြီးစီးနှင့်ကွဲပြားမှုအောက်ပါသတိပြုမိသည်
လူမှု Anxiety- ကွယ်ပျောက်ယခုပိုပြီးယုံကြည်မှု။
လိင်စိတ်-ကောင်းပြီမင်းအခု flatline အတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုထင်, ဒါပေမယ့်အတက်အကျအများကြီးပြီးနောက်၎င်း၏တည်ငြိမ်
ကိုယ့်မှာလိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်မှုမတိုင်မီက (၁) နှစ်လောက်သာကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့သံသယတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့တော့အဖြေရပြီ၊ အရေးမကြီးပါဘူး။ အရေးကြီးတာကမင်းကို“ ညစ်ညမ်းမှု” ကိုဘယ်လိုကြည့်ခဲ့သလဲဆိုတာပါ။ နောက်ဆုံးတော့ယောက်ျားတွေ။ ငါဝါကျတစ်ကြောင်းတည်းပြောချင်တယ်။ လိင်စွမ်းအင်ဆိုတာမင်းရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ပဲ။ မင်းရဲ့ဘ ၀ ဟာမင်းရဲ့ဘ ၀ ပဲ။ ဘယ်အကြောင်းပြချက်မှမဖြုန်းတီးပါနဲ့။ မင်းမှားနေလို့မင်းကမင်းရဲ့အိပ်မက်တွေကိုမင်းကိုမြှင့်တင်ဖို့ခွန်အားရှိမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပါပဲ။
PIED nofap ၏နှစ်ပတ်အတွင်းအပြီးပျောက်ကင်းအောင်ကုသ
12 နှစ်ပေါင်းနာတာရှည် fapper ။ ငါနောက်ဆုံးလေးနှစ်များအတွက်ပညာရေးနှင့်မဆိုမျှော်လင့်ချက်မပေးခဲ့ပါဘူး။ ငါတောင်မှားသောအရာကိုမသိခဲ့ပါ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ပတ် nofap ကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့်ငရဲအဖြစ် horny ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်ငါသည်ငါ့ SO နှင့်အတူထွက်အောင်ခဲ့ပါတယ်နဲ့ကျွန်မရိုးရိုးသားသားကပျောက်ကင်းအောင်ကုသရဲ့ပွောဆိုနိုငျသညျ။ ဤသည်မှော်ဖြစ်ပါတယ်။ အစဉ်အမြဲငါနောက်တဖန် porn မှ fapping ဘယ်တော့မှနေပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော့်ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကကျွန်တော့်ကိုဖြစ်ပျက်လာတဲ့အချိန်မှာ၊ အရက်အလွဲသုံးခြင်း၊ ကိုလက်စထရောနှင့် cortisol မြင့်မားသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာမှာ porn -40 days သို့လက်မထပ်ဘဲရပ်တန့်ပြီးပြေးပြီးပြproblemနာပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် BTW ၃၈ ဖြစ်သည်
ငါ့ဇာတ်လမ်း။ အဆိုပါအောက်ဖက်လိမ် porn ငါ့ကိုသွင်းထား, ငါကထဲကရဖို့လုပ်နေတာ။
ရုံတစ်စုံတစ်ဦးနဲ့ငါ့ဇာတ်လမ်းမျှဝေဖို့ရှာဖွေနေ။ ငါနှင့်အတူဤဝေမျှနိုင်ပါတယ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာတွေ့မှ၎င်း၏ဒီတော့ခက်။ မျှော်လင့်ငါသည်ဤအသိုင်းအဝုိင်းထံမှအချို့အကူအညီနဲ့ / အားပေးမှုသိမ်းသွင်း ထား. နိုင်ပါတယ်။ ငါသည်ဤရေးသားခြင်းအတွက်ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အတိတ်မေ့လျော့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်နှင့်တောက်ပသောနေ့ရက်ကာလအဖို့အပေါ်ကိုရွှေ့ကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။
ငါ 15 yrold ​​အဖြစ် porn ကို အသုံးပြု. စတင်ခဲ့သည်။ သငျသညျအများစုအဖြစ်အတူတူငါနေ့စဉ်တစ်ကြိမ်ကအသုံးပြုခဲ့သည်။ တခါတရံမှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာ။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အစွန်းရောက် porn မဆိုကြင်နာသို့ရပါစေခဲ့ပါဘူး။
ငါအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဒါဟာအကြှနျုပျကိုစိတ်လှုပ်ရှားရဖို့ porn ၏ပိုပိုပြီးပြတင်းပေါက်ယူကြောင်းအကြောင်းကြားစာကိုပြု၏။ ထိုအခါကကိုယ့်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အမျိုးအစား, ဒါမှမဟုတ်အနေအထားလိုအပ်ရှိရာသို့ရောက်ကြ၏။ တစ်ခါတုန်းက porn ၏ညစ်ညမ်းသောအမျိုးအစားများကိုတက်ရှာနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖမ်းမိ, ပြီးတော့ငါကပိုဆိုးတယ်ရှေ့မှာမချိုးယူကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချသွားတယ်။
ကျွန်မကောလိပ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာငါ့အကိုဒုက္ခစတင်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏ပထမနှစ် (ဒီဈတကယ်ကိုယ့်အကြောင်းကိုတစ်စုံတစ်ဦးမှပြောဆိုနိုင်ကြောင်းဆန္ဒရှိအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်), ငါ၏အလိင်တံရုံတက်ပုပ်။ ငါရေချိုးခန်းသွားဒုက္ခရှိခဲ့ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏လိင်တံ၏အလုံးစုံအခွအေနေရုံသေပြီဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏ဘောလုံးအတွက်ကျုံ့, သူတို့သည်ရန်အသုံးပြုတူသောမရှိသလောက်ထွက်ဆွဲထားခဲ့ကြသည်။
ငါထို့နောက်တစ်ခုခုမှားသိတယ်။ ကိုယ့် fetish porn ကိုအသုံးပြုဖို့နိုင်သော်လည်းငါတွေ့့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အခြေအနေကြားမှတစ်ခုစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်လိမ့်မယ်။
ဒါက pegging fetish မှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့ဆီးကျိတ်နှိုးဆွသောအခါငါ ejaculate နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ငါပုံမှန်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေစိုက်ထူသို့မဟုတ်သုက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နိုင်ဘူးသော်လည်း, ဒီလုပ်နေတော့တာပဲ။ ငါ၏အလိမ်၏ဤအပိုငျးကယ့်ကိုငါ့ဦးခေါင်းနှင့်အတူ messed ။ ငါစအိုဆွကနေသော်လည်းမပုံမှန်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှ ejaculate နိုင်ဘာကြောင့်မရောထွေးခဲ့သည်။
ဤသည်ငါ့ကိုအချိန်များတွင်လိင်မေးခွန်းထုတ်စေ၏။ ငါဖြောင့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသေချာဖြစ်ကြောင်းကို, ဒါပေမယ့်ငါတယောက်တည်းစအိုဆွကနေ orgasmed ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျွန်မဒါကြောင့်အပြစ်ရှိကြောင်းနဲ့လိုက်တယ်ခံစားရတယ်။
ဒါဟာသူ့ရဲ့အသစ်အဆန်းဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်စအိုဆွကနေ ejaculate ရန်ခက်ခဲဖြစ်လာသည်အထိငါသည်ဤလုပ်နေတာဆက်ပြောသည်။ ကိုယ့်မေ့သွားရောဘာမှထွက်ရိုက်ကျန်ကြွင်းစေပြီငါ၏အဆီးကျိတ်ဗလာဖြစ်လာလျှင်အဖြစ်ခံစားခဲ့ရ, ငါ့ဝှေး။
၎င်းသည်လပေါင်းများစွာအဖြေများအတွက်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပြင်းထန်စွာရှာဖွေခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ YBOP ကိုဖြတ်သန်းသွားတဲ့နေ့မှာ Willy Wonka's Chocolate စက်ရုံကိုသူကရွှေလက်မှတ်ကိုသူရလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Charlie လိုငါခံစားခဲ့ရတယ်။
သို့သျောလညျးငါ reddit ရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့် r / jalbait နှင့် r / gonewild နဲ့တူသောနေရာများ၏အသစ်အဆန်း့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့ပြန်လာစေ၏။ သောဤအချိန်န်းကျင်ခဲ့သည် ငါနောက်ဆုံးမှာဤအရာတို့ကိုအထဲကဝတ်ထားနှင့်မရှိတော့ပါကနေတစ်ခုစိုက်ထူထိန်းသိမ်းရန်နိုင်ဘူး။
ကိုယ့် NOFAp နှင့်လည်း YBOP အပေါ်ဒီနေရာမှာဖော်ပြထားတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ပတ်သက်. အလေးအနက်ရရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါဤဖြစ်ပါတယ်။
ငါ porn မှ masturbating မပါဘဲ 3months အဘို့အသွား၏, ဤအကြှနျုပျကိုပုံမှန်ပြန်လာကူညီပေးခဲ့သည်။ ငါအသကျရှငျခံစားရတယ်, ငါ့လိင်ပြန်ရောက်ခဲ့သည်။ ငါညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ masturbate နိုင်ဘူး။ ငါပဲရေချိုးခန်းရလိမ့်မယ်, ငါ့နည်းနည်းကောင်လေးအဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သို့သော်ယင်းကကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်မှုအလွန်နည်းသည်ဟုခံစားရစေပြီး ပြန်၍ ပြန်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ငါနောက်တဖန် r / gonewild သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပိုပြီး porn မှတိုးတက်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းတီးလိုက်တယ်၊ ငါကအဲဒါကိုရိုက်နှက်လိုက်ပြီ၊ ငါပြန်ကောင်းလာပြီ၊ ပုံမှန်စိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီ၊ နံနက်ခင်းမှာတမ်းတနေတဲ့အရာအားလုံးကိုပုံမှန်လိင်စိတ်နိုးထစေတယ် ...
အကယ်၍ ငါ့မှာစအို orgasm များရှိရင်ငါမဆက်ပဲအနှိပ်ဆက်ဆက်နှိပ်နေတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီကိစ္စကပိုဆိုးသွားပြီးပြန်လည်နာလန်ထူလာတယ်။
(အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်ကစိတ်ဝင်စားလျှင်ဆီးကျိတ်အနှိပ်ကောင်းသည့်အခါသင်သည်အပတ်စဉ်များစွာအတွက်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းဆုံးရှုံးသွားသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်သင်၏ရဲရင့်မှုအားလုံးကဲ့သို့ပင်နှင်ထုတ်ခြင်းခံရသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်စိုက်ထူရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ နောက်ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာမှာငါအဲဒီအရာတွေနားမလည်ခဲ့ပေမဲ့အခုငါနားလည်တယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှထပ်တူအခြေအနေမျိုးမကြုံရဘူးဆိုရင်ငါ့ကိုစာတိုပို့ပေးရင်လည်းမင်းရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုငါပြောပြပါမယ်)
လောလောဆယ်ကိုယ့် NOFAP စွန့်စားမှုသို့အကြောင်းကိုနှစ်ပတ်အတွင်းဖြစ်ကြောင်းကို, ဈပြီးသားကောင်းသောခံစားရတယ်။ ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုထဲကလိင်နှိုးဆွအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖြတ်ကြပြီ။
ငါပြီးသားယခုအပတ်နှစ်ခုနံနက်လားဖြစ်လာတာပေါ့။ ကိုယ်အဘို့ငါဇန်နဝါရီလရက်စွဲတစ်ခုထားကြ၏။ ငါ့ကိုယ်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုပါကဤရက်စွဲတွင်, ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်တစ်ချိန်က FAP ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအစီအစဉ်ကိုမစီစဉ်ပါဘူး၊ ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်ကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်စီစဉ်သည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော့် fapping ကိုတစ်လတစ်ခါကန့်သတ်တယ်။
၃၆ ရက်တည့်တည့်မှာရှိနေပြီးကျွန်တော့် ED လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီ Nofap က ED၊ ယောက်ျားကိုငါကုသပေးတာကျန်တာတွေကိုမင်းမပြောနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ ED ပြproblemsနာတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ LINK
ငါလုံးဝ PIED မှပုံမှန်နှင့်ကျန်းမာသည့်လိင်ကိုရှောင်ခြင်းမှသည်သွားခဲ့သည်။ ငါ nofap ပေါ်မှာလုပ်ခဲ့တာရက် ၆၀ လောက်မှာပုံမှန်ကျန်းမာတဲ့လိင်ကိုရရှိခဲ့တယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပျော်ရွှင်မှုနှင့်မဆက်စပ်သေးသောကြောင့်သင်၏ပထမဆုံးအကြိမ်မှာအနည်းငယ်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ သင်လိင်ဆက်ဆံပြီးသည်နှင့်တခါသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကလှုံ့ဆော်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးသင်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသည်။ ခွန်အား ရှိ၍ စိတ်ရှည်ပါ၊ လင့်ခ်
အခုငါ ED မှလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ။ နေ့ ၁၁ ရက်တွင် ED မှကုသလိုက်ပါပြီ။ nofap နှင့်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသုံးပြုသူများအသစ်အတွက်ရောက်ရှိနေပြီး nofap ကိုသုံးပါ။ တကယ်အလုပ်လုပ်လို့ပါ။ ကိုယ့်မျှော်လင့်ချက်ကိုလည်းမပျောက်စေပါနှင့်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် :)))
ကျွန်ုပ်၏ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကို Nofap ကကုသပေးခဲ့သည်
ဒီပလက်ဖောင်းကိုတည်ထောင်တဲ့သူကရပ်ကွက်တစ်ခုလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာတယ်။ မင်းမရှိရင်ငါ ED ကိုကုသမှာမဟုတ်ဘူး။ ရက်ပေါင်း ၉၀ လောက်ကြာပြီးနားလည်မှုရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုပြန်ပြီးဒုက္ခရောက်စေခဲ့တယ်။ ငါကြိုတင်မှာဖြစ်ပါတယ်စဉ်အတွင်းခက်ခဲရလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ငါ့စိုက်ထူညာဘက်ကိုချွတ်သို့မဟုတ်ငါကွန်ဒုံးကိုတင်ပြီးသကဲ့သို့, (ကွန်ဒုံးပြိုကျ) ။
ငါ၏အ ED ကုသပေးခဲ့သည်
ငါရက်ပေါင်း 30 ရက် fap မပါဘဲသွားပေမယ့်ငါလိင် handjob တယ်နှင့်လာ။ လာ။ ဒါဟာတစ်ပါတ်အကြာတွင်အတုလိင်ဆက်ဆံခံစားခဲ့ရငါလာ။ ငါအရမ်းပျော်ရွှင်ပြီးနောက်2နှစ်အကြာတွင်ကြောင့်မယုံနိုင်ပြီးငါနောက်ကျငါယုံကြည်မှုဖြစ် ငါဟာအရမ်းကိုသက်သောင့်သက်သာရှိတာကိုခံစားရတယ်၊ ငါဟာ Cloud9လိုမိန်းကလေးတွေနဲ့စကားပြောတာ၊ သူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်မှာပြုမူတာကဘုရားသခင်လိုပဲ။ ငါပြောတာကတကယ်မထိုက်တန်ဘူးဆိုတာပဲ။ ဒါက ၃ စက္ကန့်အတွင်းမှာကြီးမားတဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခု၊ ဆက်သွားပါ
ဒါကြောင့်ငါက 19 ရက်ပတ်လုံး porn မှရှောင်ကြဉ်, ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့သည် အလွန် ငါယခင်ကထက်လျော့နည်းမကြာခဏ, ငါပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကပုံမှန် function ကိုမှပြန်လာစတင်ခဲ့သည်။
လူကြီးလူကောင်း, ငါသည်ဤ reboot တစ်စိတ်အားသန်သောတာဝန်ဖြစ်နိုင်သောအတွေ့အကြုံကနေကိုသိရ။ အခြို့သောပျြောမှေ့စစံချိန်တင်မြင့်တက်ခြင်းနှင့်အချို့ demotivating စိတ်ဓာတ်ရှိပါတယ်။ ငါ porn ကိုကြည့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကတည်းကဒါဟာသုံးနှစ်ခွဲလအတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏ကနဦးလှုံ့ဆျောမှုကျောငါ့အ erectile အစွမ်းသတ္တိကိုရနျဖွစျသညျ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, ငါသည်အညစ်ညမ်းဖြတ်သင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိမိကိုယ်ကိုနှင့်အတူပြန်လည်ပေါင်းစည်းထက်လျော့နည်းဘာမျှအကြောင်းနားလည်သို့ရောက်ကြ၏။
အခြားသူများ၏ပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့် yourbrainonporn.com တွင်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းနေစဉ်ငါနှင့်လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးများအပေါ်ကျွန်ုပ်၏အမြင်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းကြောင့်အကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ကိုငါသဘောပေါက်ခဲ့သည် ဒီအလေ့အကျင့်, ငါ့အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်အတူငါ့ကို corpulatory ခွန်အားမရှိသောဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ရုံမက, လိင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ငါ့မျှော်လင့်ချက်အလွန်မြင့်တက်ခဲ့သည်။
နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းများကိုရှောင်ကြဉ်ရန် - ငါဟာအမြဲတမ်းလိင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီး၊ အဲဒါဟာကျေနပ်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းပြီးဘဝရဲ့အဖိုးတန်တဲ့ကဏ္ aspect ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်မနှစ်ပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းတဲ့လိင်မှုကိစ္စအသုံးပြုမှုကာလအတွင်းမှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတိုင်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုအချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မမျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ ငါအဲဒီအချိန်ကအဲဒီလိုစဉ်းစားခဲ့ဖူးတာတော့တစ်ခါမှမစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်ရင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတစ်ချိန်လုံးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာတွေကကျွန်တော့်အမြင်ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာနားလည်နိုင်ပါတယ်။ လိင်သည်ဘဝ၏အနှစ်သာရဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်သည်အသိအမှတ်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်အတည်ပြုခြင်းပုံစံတစ်ခုအဖြစ်လိုအပ်သည်။
ဒီဥပမာရဲ့အကောင်းဆုံးသာဓကကတော့ရက်စွဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မရဲ့မျှော်လင့်ချက်ပါ။ အရင်တုန်းကကျွန်တော်ဟာအရေးယူမှုမရခဲ့ရင်ဒါဟာပျက်ကွက်တယ်လို့အမြဲတမ်းယူမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖိအားမပေးဘူးဒါမှမဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်ရက်စွဲကိုမထားဘူး။ ငါရိုးရှင်းစွာအမြိုးသမီးမြားနှငျ့ခင်မင်ရင်းနှီးအပြန်အလှန်ပျော်မွေ့ - ဤအားဖြင့်သူတို့နှင့်အတူငါ၏အအောင်မြင်မှုနှုန်းတိုးမြှင့်!
ငါကလိုအပ်တဲ့အခါ "(ပိုကောင်းတဲ့စကားလုံးများ၏မရှိခြင်းများအတွက်)" လုပ်ဆောင်နိုင် "ပါပြီ။ ဒါဟာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ Awesome! အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ဖန်သားပြင်ရှေ့တွင်ထိုင်နေပါက၊ “ ဒါကငါမဟုတ်ဘူး။ ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကိုအမြဲကြည့်နေပေမယ့်လိင်နဲ့အမျိုးသမီးတွေအဲဒီလိုမထင်ဘူး!” မင်းရဲ့ PMO အလေ့အထနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြားပြissuesနာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်လူတိုင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားပုံရသော်လည်းအလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအပြောင်းအလဲများကိုသတိပြုမိရန်တောင်းဆိုခြင်းသည်များစွာသောလူတို့သည်မှားယွင်းမှုမရှိပါ။
PMO အချိန်ကာလ၌ဖော်ပြခဲ့သောအားနည်းချက်များကိုကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မှအသိအမှတ်မပြုပါ။ ငါလုပ်ရင်တောင်ငါကသူတို့ကို PMO အလေ့အထလို့သတ်မှတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါထင်နေတဲ့စွဲလမ်းသူတစ် ဦး ရဲ့စဉ်းစားပုံ ငါပြောချင်တာကတော့မင်းဟာဒီစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီးမင်းရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံထိုက်ပါတယ်။ အခက်ခဲဆုံးအချိန်များ၌ပင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချပါ။ သငျသညျကျန်းမာစိုက်ထူရုံထက်ဒီအများကြီးပိုရလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏အမြင်အချို့ကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန် ပို၍ စွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးကိစ္စတွင်သင်သည်ထိုအရာ မှနေ၍ ကျန်းမာသောလိင်ဘဝကိုရရှိလိမ့်မည်။
ငါသည်သင်တို့၏ reboot စဉ်နှင့်အပြီးသာအကောင်းဆုံးအားလုံးသငျသညျသတ်တိရှိလူကြီးလူကောင်းဆန္ဒရှိ! သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါကငါ့ကိုသိပါစေ!
ငါဟာအလွန်အလားတူအခြေအနေမျိုး၌ရှိ၏ 2-3 ရက်သတ္တပတ်တွေအကြောင်းပြီးနောက်ငါ၏အ ED ကုသပေးခဲ့၏။ ငါ့အဘို့, ကအားလုံးကို fapping ဆန့်ကျင်အဖြစ်အမှန်တကယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အာရုံခံစားမှုဖို့အသုံးပြုရကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတင်းအကျပ်အကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကကူညီပေးခဲ့ကြောင်းကိုဖတ်သိကောင်းစရာများ
2) ကိုအာရုံအာရုံစိုက်ပါ။ သူကတောင်သင့်ရဲ့မျက်စိပိတ်ဖို့ရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
၃) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်အောင်ကြိုးစားပါ၊ သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုကျေနပ်အောင်မလုပ်ပါနှင့် (အနည်းဆုံးသင့် ED ကိုမအောင်မချင်း) ။ ငါအရမ်းကြိုးစားအားထုတ်သည့်အခါတိုင်းသတိပြုမိသည်။
ငါ ED ရှိခဲ့တယ် ၎င်းကိုယခုကုသလိုက်ပါပြီ။ ထိုအခါငါအများကြီးပိုအသက်ရှင်လျက်ပါပဲ။ ထိုအခါငါတိုက်တွန်းတိုက်ဖျက်ရန်တစ်ကယ့်ကိုခက်ခဲအချိန်ရှိခြင်းတာပါ။ porn နှင့်ငါနှင့်အတူပေါ်မယ့်အရာတစ်ခုခုကျိန်းသေရှိပါတယ်။
Edit ကို: ငါပြီးသားငါ့ကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသသော 90 ရက်ပေါင်း reboot ကိုပြု၏။ ထိုအခါမူကားအနည်းငယ်ပြန်ချော်။ လိင်တံသေးသဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ငါရှိသောကြောင့် fapping ၏အကြိမ်အနည်းငယ် Reboot လုပ်သွား။ သို့ရာတွင်အဘယ်သူမျှအမာခံ porn ။
Porn-သွေးဆောင် ED နှင့်အတူ FAP-troopers ဘို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ငါဒီမှာအသေးစိတ်သို့မသွားဘူး, ဒါပေမယ့်ငါကဒီသို့ 45 ရက်နီးပါး။ ငါလှုံ့ဆျောမှုအကြီးအကျယ်လျှော့ချထားပါတယ်ရှိရာအချို့သောကာလရှိခဲ့ပေမယ့်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ငါလုပ်နေတာနေစဉ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုမိုကျန်းမာသန်စွမ်းစေ၏။
ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ နက်နက်နဲနဲနက်နက်နဲနဲလေ့လာမည်မဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၀ အရွယ် Porn Induced ED မှပြန်လည်ထူထောင်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ကျွန်တော့်အခြေအနေကမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ပုံရတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ Porn Induced ED သည်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားဘေးတွင်အဝတ်အချည်းစည်းတင်ထားသည့်အချိန်တွင်ထက်ဝက်ခန့်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတုန်ခါနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒါကကျွန်မရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးကျွန်မရဲ့ ED ကိုစိတ်ပူပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျရှုံးမှုအတွက်ကြောက်စရာမလိုဘဲကျွန်မရဲ့ရည်းစားကိုတောင်မနမ်းနိုင်တဲ့အထိပါပဲ။
များစွာသောကြိုးပမ်းမှုများအပြီး ၄၅ ရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားသည်ယနေ့တွင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပူမိလျှင်ပင်ကျွန်ုပ်သည်အနမ်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းဖြင့်အခက်အခဲမရှိသောအရာကိုရရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အနမ်းကိုရပ်တန့်လိုက်တယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်တဖန်နမ်းရှုပ်ကြပြီး၎င်းသည်ယခင်ကကဲ့သို့ပင်ပြန်ပေါ်လာခဲ့သည်။ နမ်းခြင်းမှဆွဲဆောင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အလွန်ဝေးလွန်းသည်ဟုထင်ခဲ့သော်လည်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အဆုံးတွင်မြင်နိုင်သောအလင်းရှိပြီးသားဖြစ်သည်။
ဘဝဟာလိင်အကြောင်းမဟုတ်တာကိုလည်းသဘောပေါက်လာတယ် ယခုတွင်ငါသည်ပိုမိုသိရှိနားလည်လာသည်၊ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ၊ မိမိကိုယ်ကိုငြိမ်းချမ်းစွာနေနိုင်ပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောလိင်အကျင့်များကိုဘေးဖယ်ထားလိုက်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းများဖြင့်သာပိုမိုကောင်းမွန်အောင်အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ပန်းတိုင်မှာ ၃ နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည် ၁၁၀ သို့ရောက်ရန်နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ထပ်မံကြိုးစားရန်သဘောတူလိုက်သောအခါဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်တော့လိင်ဆက်ဆံမှုမရှိဘဲနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအရင်ကထက်ပိုကောင်းတယ်၊ အဲဒါရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကငါ့အတွက်ပဲဆိုတာငါသိတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားကိုပိုမိုချစ်ခင်တွယ်တာကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည်လိင်ထက်များစွာပိုသည်၊ လာမယ့်နှစ်မှာအတူတူသွားဖို့တောင်စီစဉ်နေတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းလိင်ဆက်ဆံမှုကင်းမဲ့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အားအခြားနည်းများဖြင့်သူမနှင့်ပိုမိုရင်းနှီးစေခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတော့ရက်ပေါင်း ၆၀ လောက်လုပ်လိုက်တယ်။ ငါလူသစ်နှင့်တူခံစားရတယ် အကြှနျုပျ၏ PIED ပျောက်သွားခြင်းနှင့်ငါ PMO ၏သက်ရောက်မှုအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်သွားကြောင်းထင်ပါတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်နံနက်သစ်သားရငါပဲယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုပျော်ရွှင်ခံစားရသည်။ NoFap ကဘဝကိုပြောင်းလဲစေတယ်၊ ​​အဲဒါဟာဘဝရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်အပြည့်အစုံမဟုတ်ဘဲမိန်းကလေးများနှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုရယူခြင်းဖြစ်တယ်။ ငါဒီခရီးကိုဆက်လက်ပြီးပိုကောင်းတဲ့လူကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ GN Fapstronauts ။
ကျွန်မအသက် ၂၇ နှစ်ရှိပြီ၊ အခုဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့စကားစမြည်ပြောဆိုတဲ့အခါငါဒေါသထွက်နေတယ်။
ငါ (မင်းလုပ်နိုင်သမျှအမျိုးသမီးတွေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လုပ်ဖို့အတင်းအကျပ်ခိုင်းတယ်) ငါဟာသူမရဲ့စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့မိန်းကလေးကိုမေးတယ်။ သူမငါ့ကိုငါ့ကိုအခန်းထဲမှာပြန်လမ်းလျှောက်ရင်းငါစကားအနည်းငယ်ပြောခဲ့တယ်။ ငါသူမ၏အပေါ်တံခါးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပိတ်ပစ်ခဲ့ရတယ်နည်းနည်းမတိုင်မီသူမကငါစိုက်ထူရတော့မယ်သတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူး!
ငါပင်လိင်စဉ်းစားမခံခဲ့ရပါဘူး။ သူမနှင့်စကားပြောခြင်းနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းမှရရှိသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်ကျွန်ုပ်အားဖွင့်ရန်ပုံရသည်။ ငါအရင်တုန်းကလိုအမျိုးသမီးတွေကိုကန့်ကွက်တာထက်ငါ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေတာကိုသိရတာဝမ်းသာပါတယ်။
ပြီးတော့“ စူပါပါဝါ” လို့မယုံကြည်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ PMO ကိုဖြတ်ပြီးမင်းရဲ့ဘဝကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့ဟာသူ့ဟာသူအင်အားကြီးမားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
PIED တဖြည်းဖြည်းအချိန်ကြာမြင့်စွာအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြန်လူ့ feeling, ပျောက်ကွယ်နေသည်
ဤသည်တနင်္ဂနွေ PIED ငါ့အဘို့လိင်ကိုဖျက်ဆီးဘူးသောငါ့အသက်တာတစ်ခုလုံးအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၈ နှစ်လုံးလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရတွေ့ဆုံမှုတိုင်းအတွက်သူနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ဒီတနင်္ဂနွေမှာသဘာဝကခုန်တဲ့အခါငါ“ ပုံမှန်” ခံစားရတယ်။
အဖြစ်မကြာမီငါ၏အရည်းစားငါ့ကိုတို့ထိကျနော်တို့ foreplay စတင်အဖြစ်, ငါကတကယ်တော့လိင်ရှိသည်ဖို့အချိန်ရောက်လာသောအခါ, ပျောက်ကွယ်သွားမယ့်ရော့ခ်ခက်ခဲစိုက်ထူခဲ့ကြတယ်! ထိုသို့သောတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အတွေ့အကြုံကကြီးနဲ့ကျွန်မထိုကဲ့သို့သောပိုမိုနက်ရှိုင်း connection ကိုခံစားခဲ့ရသည်။
NoFap အစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ ငါသာငါဒီရှိရာသို့အလျင်အမြန်တွေ့ပြီနိုင်အလိုရှိ၏။ သင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုနှင့်အကြံပြုချက်များအားလုံးအတှကျကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
သင်တစ်ဦး reboot မှတဆင့်သုတ်ရည်လွှတ်ဉာဏ်ရည်မမီခြင်းမှပြန်လည်ကောင်းမွန်ကြသူမဆိုအသုံးပြုသူများသည်ရှိခဲ့ပါလျှင်ကျွန်မအံ့ဩကြ၏။ သင့်ရဲ့ site ကို ED ALOT အကြောင်းကိုပြောသွားပေမယ့်ငါ ER မဆိုဖော်ပြထားခြင်းကိုရှာဖွေရုန်းကန်ပါပြီ။ အကြှနျုပျ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးကြောင့်ကျွန်မစဉ်းစားမိတယ်ထက်အများကြီးပိုဘုံသည်နှင့်လည်း Over-ထိတွေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစေရန်နှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းပြောပြတယ်။
ငါအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်နေ့နောက်ပိုင်းတွင် 14 ထံမှ masturbated, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်ပို။ အစဉ်မပြတ်ငါတစ်ကျွမ်းကျင်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူပါပြီနှင့် 16 / 17 အနည်းဆုံးအသက်ကတည်းကအင်တာနက်ပေါ်မှာ porn ကိုရယူသုံးခဲ့သညျ။ ငါသာနောက်ပိုင်းတွင် 20 ကနေလိင်တက်ကြွဖြစ်လာခဲ့သည် (နှင့်ဒီ site ၏အများဆုံးဖတ်ရှုပြီးနောက်ကျနော်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းနားလည်) ။ သို့သျောလညျး, ငါ ejaculate နိုင်ဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့ငါမှာအားလုံးထိုးဖောက်မှုလိင်ကနေအနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမဆွတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ 28 ၏အသက်အရွယ်မှာကျွန်မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူမှငါ့ကိုရည်ညွှန်းသူအလှည့်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးမှအကြှနျုပျကိုရညျညှနျးသူဆရာဝန်ထံသို့သွားလေ၏။ ဒီအစဉ်အဆက်ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်သောအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပေါ်ရှိအရင်းအမြစ်များခဲ့ရပြီးတစ်ဦးထက်ပိုစိတ်အေးလက်အေးချုပ်ကိုင်ထားရာမှဆွရဖို့ငါ့အလိင်တံကိုပြန်လေ့ကျင့်ဖို့ကျွန်မကိုအကြံပေးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့သူမငါ့ကိုတကယ်ငါ၏အပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်ငါလုံးဝ porn မှ masturbating မှရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်သာငါ့အစိတ်ကူးစိတ်သန်းသုံးစွဲဖို့လိုအပ်သောရာဇသံကိုပေး၏။
သို့သော်လှုံ့ဆော်မှုသည်ကျွန်ုပ်၏ခိုင်မာသောအချက်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်း) ကိုရှောင်ရန်ကောင်းသည့်အကြောင်းပြချက်မတွေ့မချင်းထိုလှုပ်ရှားမှုမှရှောင်ရှားရန်အလွန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတစ်ရက်၌ကျွန်ုပ်၏လည်ပတ်မှုအတွက်မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတစ် ဦး နှင့်သူမရဲရင့်သောပြပွဲတစ်ခုမှတဆင့်ကျွန်ုပ်၏အားထုတ်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။ နှစ်ကြိမ်
ငါနောက်ဆုံးတော့ကြောင့်ပြုသမျှဟောင်း 30 နှစ်ပေါင်းမှာ။ မကောင်းတဲ့အလေ့အထပြန်ရောက်သွားတယ်။ သို့သော်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဖိုရမ်အပေါ်မှာငါ့ပါဝင်မှု yourbrainonporn.com ၏ညှနျကွား၌ငါ့ကိုထောက်ပြကြောင့်အားလုံးအတူတကွကလစ်ခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျွန်မအပြီးအပိုင်ရပ်တန့်နေတဲ့သွားလာရင်းစေရန်လိုအပ်သောမျှတမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဒီသုံးပတ်အကြာဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအခြားသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်ကားနောက်ဖက်တွင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ငါစာသားအတွင်းစာသားအော်ဂဇင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာအလွန်လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ အခုငါ reboot ဆက်လုပ်ရတာကိုအရမ်းပျော်တယ်။ လူမှုရေးတိုးတက်လာသည်။ ငါသာငါအပေါ်ကိုဘယ်မှာထွက်သွားသောအခါငါအတွေ့အကြုံများပိုရှိသည်။ ယခုအချိန်တွင်ပစ္စုပ္ပန်ကိုကြည့်ပါ။ ငါသည်လည်းအမျိုးသမီးများနှင့်အများကြီးအများကြီးပိုမိုဆက်စပ်။
ကျွန်ုပ်တွင် ED မကောင်းပါ၊ တစ်ဝက်ခဲယဉ်း။ တစ်ခါတစ်ရံခဲယဉ်းပါလိမ့်မည်။ သို့သော်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်ချက်ချင်းပင်ပျောက်ဆုံးသွားပါသည်။ အတိတ်ကာလကအကြိမ်ပေါင်းများစွာမအောင်မြင်ခဲ့သူတစ် ဦး ထံမှအမျိုးသမီးများကိုနှစ်သက်မှုဖြင့် ၃၉ ရက်နေခဲ့ပြီးယခုကျွန်ုပ်သည်စာရွက်များတွင် AZTEC စစ်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူကကျွန်မကိုတောင်တောင်မကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့ဘူး၊ ငါ့စိုက်ထူမှုတွေကအရမ်းပြင်းထန်လွန်းလို့ ED ကကလေးကိုနုတ်ဆက်ပါတယ်နုတ်ဆက်ပါတယ်။ and me new hel hel hel new new new hours hours hours hours hours young hours use ငါဟာငယ်ငယ်တုန်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့နာရီတွေကြာရှည်မယ်လို့မယုံနိုင်ဘူး။ ခိုင်ခံ့နေပါ၊
နောက်ဆုံးအနေနဲ့နေမကောင်းဤတိုတောင်းကိုစောင့်ရှောက် 90 ရက်ပေါင်းရောက်ရှိခဲ့သည်။
ငါ 11 ၏အသက်အရွယ်ကတည်းကအများကြီး masturbated ။ ဒါဟာ ed နဲ့က de နှစ်ဦးစလုံးစေသောနှင့်ငါ့ S / အိုနဲ့ငါ့ကြားဆက်ဆံရေးဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။ အခုဆိုရင်ဒီမှာဈ 90 ရက်အကြာတွင်ဖြစ်ကြောင်းကို
အစဉ်အဆက်ကအကောင်းဆုံးလားအဖျားခတ် nofap ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ, ငါကယောက်ျားတွေကိုပြု၏။ ငါ PIED ရှိခြင်းပြီးနောက်အောင်မြင်သောလိင်ရှိသည်။
ငါစုံတွဲတစ်တွဲပြားလိုင်းဖြတ်သန်းသွားသည် ... တသမတ်တည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ နေ့ ၆၀ ၀ န်းကျင်မှာပြaနာမရှိတော့ဘူးလို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ မနေ့ညကလိင်ဆက်ဆံတယ်၊ ED သွားပြီ၊ DE သွားပြီ၊ ဖျော်ဖြေရေးစိုးရိမ်စိတ်မရှိတော့ဘူး။
ပြီးပြည့်စုံသောလိင်။ ငါပျောက်ကင်းအောင်ကုသ 100% ဖြစ်ပုံရသည်။
အကြှနျုပျ၏ရည်းစား2ပတ်ကွာခဲ့သညျ။ သူမထွက်ခွာသွားမတိုင်မီသူမသည်သူမ၏ကာလပေါ်သို့တနင်္ဂနွေသွားလေ၏။ ကျနော်တို့လိင်ခဲ့ဖူးပြီးကတည်းကဒါကြောင့်3ရက်သတ္တပတ်ခဲ့သညျ။ ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲနှင့်စိတ်ကူးယဉ်စရာမလိုဘဲအချိန်အများစုကိုဆိုသော်ငြားငါ, သူမသွားကြောင်းအခါအတော်လေးနည်းနည်း masturbating စတင်ခဲ့သည်။ ငါယဉျလုပ်ခဲ့တယ်တဲ့အခါမှာကျွန်မသူ့ကိုငါအတိတ်ကာလနှင့်အတူခဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်အိပ်ခန်း Adventures သို့မဟုတ်အခြားမိန်းကလေးငယ် (မျှအရူး porn စတိုင်အတှေးအ) ၏စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိင်ဆက်ဆံမှုထဲကို ၀ င်ပြီးကတည်းကငါ့ရဲ့လိင်စိတ်ဓာတ်ကအများကြီးတက်သွားပုံရတယ်။ မှန်မှန်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာဟာပညာမဲ့တာကိုသဘောပေါက်လိုက်တယ်။ ငါမနက်၌သူမမှပတ်ပတ်လည်သို့သွားလေ၏။ သူမကိုတွေ့ရပြီးသူမကိုငါ့လက်များနောက်သို့ကျောခိုင်းခဲ့သည်။ ကျနော်တို့စကားပြောနေတုန်းအဝတ်အစားလဲနေတဲ့အိပ်ခန်းထဲကိုချက်ချင်းပဲ၊ ငါဘယ်လောက်သဘာဝကျတယ်၊ သူမကတစ်ပတ်လုံးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ခဲ့ကြောင်းပြောပြသည်။ ဒါကသူနဲ့မတူပါဘူး သူမသည်သူမအကြှနျုပျ၏ reboot အားထုတ်မှုအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။
သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်သည်အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ သူမသည်သူမပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်အလွန်စိတ်ထိခိုက်လွယ်ပြီးအနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ တကယ်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ် ကျွန်မတို့တစ်ချိန်ကလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးနှစ် ဦး စလုံးသည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်မိနစ် ၃၀ ကြာပြီးနောက်တွင်၊ ငါ့မှာ O နှစ်ခုရှိတယ်။ ငါတစ်လျှောက်လုံး 30% ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ ထူးဆန်းသည်မှာငါသုက်ပြီးနောက် 100 မိနစ်ခန့်အကြာတွင်စိုက်ထူခဲ့သည်။ များသောအားဖြင့်တော့ငါဟာနာရီအနည်းငယ်ကြာအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့သွား၏။ ထို့နောက်ပြန်လာ။ , တဖန်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ငါသည်ဤအချိန် (ရှည်လျားသော session ကို) ကိုမပြုခဲ့။
စုစုပေါင်းဒီငါ့ဘဝ၏အကောင်းဆုံးလိင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ ED အကြောင်းကိုစဉ်းစားတော့ဘူးသောအချက်သို့ယခုငါရောက်ပြီ။ “ ငါအခက်အခဲရှိသေးသလား”၊ “ ငါပြtoနာတက်တော့မယ်”၊ “ ငါမသွားနိုင်တော့ဘူး၊ ငါခက်ခဲတော့မှာမဟုတ်ဘူး” ။ ဒီဟာအခုပျောက်ကွယ်သွားပြီ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဖြတ်ပြီးခဏထွက်သွားပုံရတယ်။ မနေ့ကငါလုံးဝနှစ်မြှုပ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုပါ။ ရုံအတွေ့အကြုံခံစား။ အံ့သြစရာ
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ 130 ရက်အကြာမှာ, ကိုယ့်နောက်တဖန်အမှန်တကယ်လူကိုဖြစ်လာသည်။
၎င်းသည် ၂၀၁၂ နှစ်သစ်အတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းသည့်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမရှိဘဲ ၄ လကျော်အကြာတွင်ဤပြန်လည်စတင်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုထိကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုအလုံးစုံပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်အတည်ပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယခုသီတင်းပတ်တိုင်းနံနက်တိုင်းနီးပါးနံနက်သစ်သားများရှိခဲ့ဖူးပြီးအချို့မှာ ၁၀-၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာပြီးအချို့မှာမူတစ်နာရီပင်ကြာသည်။
ယခုတွင်ငါသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရမ်းပျော်။ ဂုဏ်ယူသည်။ ဒီနေရာမှာဘယ်လိုဖြစ်ပျက်၏အသေးစိတ်ကို။ ဒီဖိုရမ်မှအခြားယောက်ျားများနည်းတူငါတစ်နေ့နေ့ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သော်လည်း၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှကြာမြင့်ရသည့်အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်များစွာစိတ်ပူခဲ့သည်။
ဤကာလအတွင်းဈအဘယ်သူမျှမအောင်မြင်မှုနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာစမ်းသပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၏ Lil နည်းနည်းရှိပါတယ် youtube ကဗီဒီယိုကြည့်ခြင်းနှင့် ejaculating မပါဘဲ masturbate ။ သို့သော်ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်စမ်းသပ်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အပြုသဘောစဉ်းစားရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကိုယ်မကြာသေးမီကဖြစ်သည့်လအတွင်းကာလ4မှရောက်ရှိတဲ့အခါ, ကိုယ့်အကြောင်းကိုကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုကိုယ်လုပ်ခဲ့တယ်ဈရေချိုးခန်းယူနီးပါးအခါတိုင်းခဲ့ကိုယ့် Lil ယောက်ျားလေးတစ်ဦးအလင်းအနှိပ်ကိုပေး၏။ ငါဝှေး massaged, ပြီးတော့တချို့အလင်းနှင့်နှေးကွေးလေဖြတ်ကိုပြု၏။
ကြောင်းအကျင့်ကိုကျင့်၏အကြောင်းကို 1 ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်, ငါ့ကောင်လေးငါ့အနှိပ်ခံခြင်းနှင့်လေဖြတ်ခြင်းမှပိုကောင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်တူသောဈခံစားခဲ့ရနှင့်နောက်ဆုံးတော့ကိုယ့် Hard-ရော့ခ်နံနက်သစ်သားတယ်။ ဤသည့်အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကလူတိုင်းအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်သေချာမဖွစျ၏။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ပြောပါကဘာလဲဆိုတာတဦးတည်းအရာကျနော်တို့ခိုင်မာတဲ့နှင့်အပြုသဘောဆက်နေရန်ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ခါတလေကျွန်တော်စိတ်ဆိုးလာပြီးအရှုံးပေးချင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကို“ wtf dawg၊ မင်းကထိပ်ကိုရောက်နေပြီ။ အခုဆိုရင်သင်ကြိုးကိုလွှတ်လိုက်ပြီးအောက်ခြေကိုပြန်စလိုက်မယ်” လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ ထိုအခါငါဒီ reboot မတိုင်မီမရေမတွက်နိုင်သောမအောင်မြင်ကြိုးပမ်းမှုများကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်သောခက်ခဲသောကာလကိုစဉ်းစားပါ, ငါ4လကာလငါ့ဘဝ၏အကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာမြင်, အဘယ်သူမျှမနှင့် w နှိုင်းယှဉ်နိုင်ဘူး။ ငါသည်ဤအချိန်ကာလအတွင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအများကြီးစစ်တိုက်ခဲ့ရတယ်, ငါလုပ်ခဲ့တယ်။
ငါပြောစရာအများကြီးရှိသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဒီမှာရပ်လိုက်မယ်။ ဒီခရီးစဉ်ရဲ့အဓိကသော့ချက်ကမှန်ကန်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုရှာဖွေဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိရပါ။ ဤနေရာတွင်လူတိုင်းအတွက်ကောင်းသောကံကောင်းပါစေ၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလုပ်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြပါစို့၊ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်မှာမည်သူမဆိုအကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်သည်ဤတွင်အမြဲရှိနေသောအချိန်ဖြစ်သည် !!
PMO မရှိသည့်ရက်ပေါင်း ၈၀ ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး chaser သည်ကျွန်ုပ်ကိုပိုကောင်းလာခဲ့သည်။ လိင်မှုကိစ္စကောင်းတယ်။ တိုးတက်မှုအမြောက်အများကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ် - ခိုင်မြဲသောစိုက်ထူခြင်း၊ အာရုံခံနိုင်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းစတာတွေ။ ဒါပေမယ့်နောက်နေ့နက်နက်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးကြည့်နေခဲ့ရတယ်။ လွန်ခဲ့သောအပတ်ကငါ PMO ဆွေးနွေးမှုလေးကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးနှစ်ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ပြီးတဲ့အခါထူးခြားမှုတစ်ခုကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ငါစိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ရုန်းကန်ခြင်း၊
ဒီကိုဖတ်ရှုသောသူတို့အဘို့လျင်မြန်စွာ update ကို။ ငါနေ့ 92 ရဲ့အဆုံးမှာအိပ်ရာကိုသွားမယ့်အကြောင်းကိုဖြစ်၏။ ငါနောက်ဆုံးညဥ့်ရာခေလနှင့်အတူအောင်မြင်သောလိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
စိုက်ထူခြင်းကို ၂၅ မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပြီး၎င်း၏နောက်ဆုံး ၅ မိနစ်သည်ပျော့ပြောင်းပြီးပိုမိုပျော့ပြောင်းလာခဲ့သည်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ဝက်ခန့်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုကြည့်ရှုရန်အချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့သော်လည်း၎င်းသည် ၉၀ +% မာကျောမှုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ အရမ်းပျော်တယ် ငါကအနည်းဆုံးစက္ကန့်အနည်းငယ်ထက်အရှိဆုံးထိသုံးပြီးရာခေလထံမှအလွန်အနည်းငယ်မျှသာလက်စွဲနှိုးနှင့်အတူကအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်လုံးဝမထိဘူး
ငါ abstinence ခရီးထွက်စတင်လူတိုင်းကအနည်းဆုံး 100 ရက်ပေါင်းလုပ်နေတာမှကျူးလွန်ဖို့လိုအစဉ်အဆက်ထက် ပို. ယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်ကြောင်းကို။ ငါဘာလို့အဲဒီလိုပြောရတာလဲ နေ့ ၈၈ လောက်မှမှစပြီးငါ ၆ ပတ်ကျော်အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်ကနေစထွက်လာပြီလို့ခံစားရတယ်။
ရည်မှန်းချက်ကိုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များအဖြစ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များအဖြစ်သို့ကျော်ဖြတ်ပြီး၎င်းကိုပိုမိုပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ငါလုပ်ခဲ့သကဲ့သို့အလားတူလုပ်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်ပြက္ခဒိန်တစ်ခုကို spreadsheet တစ်ခုပေါ်တွင်ထားပြီးပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကိုပြီးမြောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ရွေးပါ။ အဆိုပါ abstinence သည်မည်မျှကောင်းမွန်စွာနှင့် PMO ကိုအရှုံးမပေးသောကြောင့်သင်မည်မျှသန့်ရှင်းစွာခံစားရသည်ကိုစဉ်းစားပါ။ သန့်ရှင်းခြင်း၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းခြင်းနှင့်အခြားအရာများပြုလုပ်ရန်သင်မည်သို့လှုံ့ဆော်ခံရသည်ကိုစဉ်းစားခြင်းနှင့်သင်၏ဘဝအတွက်တက်ကြွမှုတိုးပွားစေခြင်းအကြောင်းများကိုသင်စဉ်းစားခြင်းကပိုကောင်းသည်။
လူတွေကသုံးဆယ့်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုရည်မှန်းသင့်တယ်လို့လည်းငါပြောတယ်၊ မင်းကအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ကိုသင်ပြီးမြောက်နိုင်ရင်ရေရှည်ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲဖို့မင်းလမ်းပေါ်ရောက်နေပြီလေ။ သင်ဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုစိတ်ဓာတ်ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးအိပ်ခန်းအပြင်မှာမင်းရဲ့ဘဝကိုတကယ်တွေးနေတယ်။
လအနည်းငယ်အကြာမှာအပြောင်းအလဲတွေမမြင်ရရင်စိတ်ပူစရာမလိုတော့တဲ့လူတွေကိုငါပြောမယ်။ သငျသညျငါကဲ့သို့ 10 နှစ်များအတွက် PMO'ing ခဲ့ကြလျှင် (ပြီးခဲ့သည့်4သို့မဟုတ်5ခန့်သာတကယ်မကောင်းတဲ့ခဲ့ကြသည်) ထို့နောက်သုံးလသို့မဟုတ်3လစဉ် abstinence အမှုအရာ၏မဟာအစီအစဉ်တွင်အချည်းနှီးဖြစ်၏။
ငါနေ့ရက်များကိုရေတွက်နေတုန်းပဲလို့ပြောသင့်ပါတယ်။ ငါ 2012 ခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံး relapse မရှိဘဲစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ ငါသုံးဆကိန်းဂဏန်းများနီးပါးဖြစ်ကြောင်းကိုဆိုတဲ့အချက်ကိုအကျင့်ကောင်းများရှိပြီးသားနှင့်ငါကြောက်စရာဘာမျှမရှိသည်သောငါ့ကိုပြောပြသည်။ ငါအွန်လိုင်းရှိနေတုန်းပဲ PMO'ing ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ညမှာညဥ့်နက်နေလို့အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်းနေတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမဟုတ်ဘူး။ ငါစာသားအဘယ်သူမျှမအကျိုးစီးပွားရှိသည်။ P နဲ့ M ဟာအခုတော့ပျင်းစရာမရှိ၊ အဓိပ္ပါယ်မရှိ၊
ငါရာခေလနှင့်အတူအတော်လေးမကြာခဏအော်ဂဲနစ်နေစဉ်, ငါနေဆဲ porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ဖယ်ရှားပစ်နေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ရေရှည်တွင်သူတို့ကိုဘယ်သောအခါမှနောက်တဖန်မလုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ သူတို့သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ခုလုံးအတွက်အကျိုးရှိသောစွမ်းအင်ဖြုန်းတီးခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည်သင့်ကိုသိသည်ထက်ပိုပြီးသင့်ကိုနှိုးဆွပေးသည်။ သင်ပြန်လည်နာလန်ထူလာသောအခါသင်တွေးမိသည်ထက် ပို၍ စွမ်းရည်ရှိပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောလူသားတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါသင့်အပေါ်မည်မျှဆိုးကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းသိသာထင်ရှားလာသည်။
ငါတနင်္ဂနွေမှာရုပ်ရှင်ရုံသွား။ မိုက်ကယ် Fassbender သရုပ်ဆောင် Shame ကိုကြည့်။ တောက်ပ။ ဒီမှာလူများစွာအတွက်အလွန်များပြားသောဂရပ်ဖစ်လိင်မြင်ကွင်းများရှိသည်။ သို့သော်၎င်း မှလွဲ၍ သင်ပြန်ကောင်းလာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကြည့်ရမည်ဟုငါပြောလိမ့်မည်။ သူဟာလစာကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်နဲ့ကောင်းတဲ့တိုက်ခန်းနဲ့အတူသူ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်အပြင်ပန်းအောက်မှာရှိပြီးအပြင်ပိုင်းအပြင်ပန်းကအားနည်းသူ၊ အထီးကျန်သူ၊ ဒေါသအပြည့်နဲ့လိင်အကျင့်စွဲလမ်းမှုကြောင့်စိတ်ပျက်အားလျော့သွားရသည်။ ။ လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများ၊ သူစိမ်းများ၊ ဖြတ်သန်းသွားလာသူများ၊ သငျသညျသူ့ကို porn တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ကြည့်, ကြည့်ရှုပါ။ သူ့ကိုယ်သူမုန်းတီးနေသည်ကိုသင်တွေ့မြင်ရသော်လည်းသူသည်အစွမ်းမဲ့သောကြောင့်သူမလုပ်နိုင်သည့်အရာမဟုတ်ပါ။
ရုပ်ရှင်၏အကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းမှာသူလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူအိပ်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါသူနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းခံခဲ့ရသော်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောကြောင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့။ နူးညံ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သူသည်ပြည့်တန်ဆာတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ မိန်းမသည်သူ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။
ငါပြောသကဲ့သို့ကရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးစားနေသူတစ် ဦး အဘို့အများလွန်းလွန်းသည်, သို့သော်ဤ site နှင့် YBOP အကြောင်းအားလုံးအတိအကျဖြစ်ပါသည်။ သင်ထိုကဲ့သို့သောပြaနာရှိနေသည်ဟုသင်လုံးဝသံသယမ ၀ င်သူလူများစွာအားဘေးဆိုးကျရောက်စေသည့်အရာအားအလွန်ပြင်းထန်စွာကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်သည်။ အားလုံးသူချင်း abstinence သူရဲမှကံကောင်းပါစေ။ ကိုယ့်ကိုတစ်ကြိမ်မှာတစ်ရက်ယူပါ။ PMO ဆန့်ကျင်ခြင်းထက်ပိုလိုလားတောင့်တခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဒါဟာပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်ပြီးလွယ်ကူတဲ့စိတ်ကို set ။
အဲလက်စ်: “ သားရဲရဲ့ခေါင်းကိုအသာအယာတင်ဖို့ငါတောင်မှညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်တာတောင်မှမကြည့်တတ်ဘူး။ သူမပါးစပ်နဲ့စကားပြောတာကိုကျွန်တော်အရမ်းစိုက်ထူခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သူရပ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲပြိုလဲသွားတယ်။ - အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များမှားလျှင်၊
မင်းကြည့်နေတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကို Alex နဲ့ ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲနေတုန်းပဲ၊ သင် porn ကိုကြည့်နေတုန်းမှာမဟုတ်ဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနေတုန်းပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခက်ထန်စွာနေရန်ကြိုးစားခြင်းသည်သင် PMO အခြေအနေခံစားနေရဆဲဖြစ်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ သင်ကအဆိပ်ဖြစ်သကဲ့သို့ porn ကိုနှင်ထုတ်ရန်ရှိသည်။ ဒါဟာအက်ကြောင်းရပ်တန့်ပြီးဆေးလိပ်သောက်တဲ့လူတစ်ယောက်လိုပါပဲ။ သူတို့ဟာတူညီတဲ့စွဲလမ်းမှုရဲ့ကျွန်တစ်ယောက်ဖြစ်နေဆဲပဲ။
ငါနက်နက်နဲနဲနက်ရှိုင်းစွာတူး။ သင့်အတွင်းရှိအလိုတော်စွမ်းအားကိုရှာရန်လိုသည်။ ငါအသက်ရှင်ရန်လိုအပ်သကဲ့သို့ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေ; ယခုငါစဉ်းစားခဲ။ ငါနောက်ကျောကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ငါအဘယ်ကြောင့်ဤမျှအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်အဘယ်ကြောင့်တွေးမိ။
ငါ reboot လုပ်ပြီးကတည်းကအခုလိင်ဆက်ဆံတာအကြိမ်အနည်းငယ်ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ငါအရမ်းဒီ sexy မိန်းမငယ်နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ငါ့ခေါင်းကလွှတ်ပေးခြင်းမှလည်နေခဲ့သည်။ ငါနှစ်အတွင်းအဲဒီခံစားမှုခံစားခဲ့ရဘူး !!!! ဒါဟာစွဲလမ်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်၊ အဲဒါကိုလက်လျှော့နိုင်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆန်းစစ်ဖို့ကြိုးစားမယ်။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာအိပ်ပျော်ခြင်းမပြုမီအနည်းဆုံးညတိုင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်လေ့ရှိတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ငါသွေးဆောင်ခံခဲ့ရတယ်၊
ယခုငါပင်စဉ်းစားမရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကလုပ်နေတာ၏မှောင်မိုက်ဘက်သိသောကြောင့်။ ကျွန်ုပ်အသက် ၄၅ နှစ်ရှိပြီ၊ လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကကျွန်ုပ်သည် FT နှင့် # # စိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုမြင်မက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် WTF နှင့်တူသည် !!!!!! ငါမှတ်မိနိုင်အောင်ဤမျှကာလပတ်လုံးအတွက်တ ဦး တည်းရှိခဲ့ဘူး။ အလုပ်များပြန်စတင်ခြင်း !!!!!!!!!!!!
ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီတော့ငါအကြံပြု 87 ပတ်ကြားနေခဲ့သကဲ့သို့ masturbate ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မျှ PMO ၏နေ့ 12 ခဲ့သည်။ အတိတ်ကာလ၌ငါအခြေခံအားဖြင့်ကိုယ့်လက်ချောင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုသုံးပါနှင့်ငါ့တပြင်လုံးကိုလက်နှင့်အတူ jerking အဖြစ်ရိုးတံ၏ဗဟိုလှုံ့ဆော်ရန်ရှိသည်ဖို့အသုံးပြုဘာမျှမအမှုကိုပြု၏။
ငါ၏အတပြင်လုံးကိုလက်နှင့်အတူ jerking ဤအချိန်အံ့ဘွယ်သောအမှုအလုပ်လုပ်ခဲ့နဲ့ကျွန်မတော်တော်လျင်မြန်စွာသို့ရောက်လာသည်မှာကူးယဉျမရှိဘဲ။ အဘယ်သို့ငါဖြစ်ပျက်ထင်သာမန်အခြေအနေများတွင်နှိုးဆွခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ငါသည်ငါ့လိင်တံ၏အစိတ်အပိုင်းများ densensitized ခဲ့ကွောငျးဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုတော့ပုံမှန် sensitivity ကိုအတူလူအများစုနဲ့တူချွတ် jerking တို့သည်ကြီးစွာသောအတွေ့အကြုံကိုနှင့်အမှန်တကယ်အာရုံခံစားမှုငါပယ်ရရှိရန်လိုအပ်အားလုံးခဲ့ကြဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကငါဟာရည်းစားဟောင်းတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံနေတာကိုသတိရမိတယ်။ တကယ်တော့မတူညီတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကပေးတဲ့ထိုးနှက်အလုပ်မှကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာ၊ ငါ porn အကြောင်းစဉ်းစားခဲ့ရတယ်။
အခုတော့ကျွန်တော့်ရဲ့ sensitivity ကိုပြန်ရပြီ။ လိင်သည်စဉ်းစားရန်မလိုအပ်ပါ။ သငျသညျကိုချွတ်ဖို့ကြိုးစားနေရန်မလိုပါ။ အဆိုပါအာရုံကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့သငျသညျကိုချွတ်ရသင့်တယ်အရာဖြစ်တယ်။ မင်းကအမြဲတမ်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်ပြီ။ အခုတော့အစီအစဉ်က ၆ ပတ်တိုင်းတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးမလုပ်ရဘူးလို့ထင်တယ်။ ထိုနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုမှေးမှိန်မသွားစေသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံးဝမဆုံးရှုံးပါ။
ကျွန်ုပ်သည်မည်မျှစွဲလမ်းနေကြောင်းနှင့်၎င်းအားကျွန်ုပ်ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုယခုကျွန်ုပ်နားလည်သဘောပေါက်လာပါကဤဆိုဒ်အတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ။ ငါအရင်ကကောင်းကောင်းမရှောင်တည့်ကောင်းကောင်းလုပ်နေပြီဆိုတာသိပေမယ့်အခုတော့ငါဟာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးအဂတိလိုက်စားမှုကိုအခြေခံပြီးအရာအားလုံးကိုကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်ပြီလို့ပြောနိုင်တယ်။ တစ်ချိန်ကဘီလ် Murray ပြောခဲ့သကဲ့သို့ယနေ့မနက်ဖြန်ဖြစ်သည် ဤသည်ကအလွန်ရှည်လျားသောနေ့၏အဆုံးမှတ် ...
-Age 23: Started ဆိုးချိုးတက်ပြီးနောက်အသက်အရွယ် 18 ဝန်းကျင်အကြီးအကျယ် porn ကို အသုံးပြု..
- ကျွန်ုပ်၏အထက်တန်းကျောင်းရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်အခက်အခဲမရှိ။ - ၂ နှစ်ကြာချိန်းတွေ့တာမဟုတ်တဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာအခြားမိန်းကလေးအချို့ကိုစတင်တွေ့မြင်ခဲ့တယ်။ - စုစုပေါင်းမိန်းကလေး ၃ ယောက်ရှိပြီးငါနဲ့အတူအိပ်ရာဝင်ခဲ့တယ်။ တကယ့်ကိုဆွဲဆောင်မှုကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေ။ - ခက်ခဲမရနိုင်ပါ။ ငါကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ရင်တောင်ငါမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်။ - ဒီစို့။ အများကြီး။ ငါ၏အပြီးသားအနိမ့်ယုံကြည်မှုအကြီးအကျယ်ထိုးနှက်။ အကြီးအကျယ်စိတ်ဓာတ်ကျ။
စောင့်အရှောက် (ငါသည်သင်တို့ကိုဤသို့ပြောနိုင်မှန်းစျေးကြီးပြည့်တန်ဆာ) ကိုမြင်လျှင်စတင်ရန်ငါ့ကို -Led ။ -This ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ပါတီ, ငါ့စွဲလမ်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ extension ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ -Problem ဟာစောင့်အရှောက်နှင့်အတူဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ခက်နေဖို့မပေးနိုင်ခဲ့ပါ။ သူတို့ကငါ့ကို cum စေရန်မိမိတို့လက်ကိုသုံးစွဲဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်။
reboot ကြိုးစားမှု relapses ၏စုံတွဲတစ်တွဲတစ်ခုတည်းဂဏန်းကြိုးစားမှုပြီးနောက်နိုဝင်ဘာလ 2011 -After စတင်ခဲ့ပြီး, ငါမ PMO တစ်3တပတ်ပြေးပြီးနောက်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဒီဇင်ဘာလ၌ပြန်ရောက်သွားတယ်။ ကျွန်မအံ့သြစရာခံစားခဲ့ရဒီ3ရက်သတ္တပတ် -During! ငါမရှိတော့ငါဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း, အမျက်ထွက်အလေးပေးစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်အခြားအရာအားလုံးခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့စွဲရိုက်နှက်ဖို့လမ်းကြောင်းအပေါ်ခဲ့တာနဲ့တူခံစားခဲ့ရနဲ့ကျွန်မမယုံနိုင်လောက်အောင်ပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလမှာငါစောင့်အရှောက်နှစ်ခုနှင့်အတူစမ်းသပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်: ဇန်နဝါရီလ 11 ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ပထမ ဦး ဆုံးမိန်းကလေးငါ့အိမ်သို့ထွက်လာ၏။ သန့်ရှင်းသော shit .. ငါခဲယဉ်းတယ်။ ပြီးတော့ခက်နေတယ်။ ပြီးတော့သူမအတွင်းမှာရှိနေစဉ် (ဥပမာကွန်ဒုံးနဲ့) အော်ဂင်စလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဘုရားရေ!!!!! ငါစောင့်ကြည့်ရမယ့်အစောင့်အကြပ်ကငါပေးခဲ့တာကိုငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကသူမရဲ့လက်ကိုမသုံးဘဲမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုအော်ဂဇင်လုပ်နိုင်တဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ပဲ! ငါအရမ်းပျော်ခဲ့တယ်
နက်ဖြန်နေ့၌ငါသူမ၏ဟိုတယ်မှာညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုမြို့သို့သွား၏။ အကြှနျုပျ၏စိုက်ထူအစှမျးသတ်တိ (ငါ 70-80% ပြောချင်) ရှေ့တော်၌ထိုနေ့ကကဲ့သို့ခိုင်မာတဲ့မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ငါခက်နေစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာသူမ၏အတွင်းပိုင်းသို့ရောက်ကြ၏။ ငါသည်ငါ့မျက်နှာပေါ်မှာဧရာမပြုံးနှင့်အတူထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။
yo 22, 12 ကတည်းက fappin နေ့က 45 အပေါ်ငြ
ဒါအေးမြနေသည်ပါ! ထိုအသွေးငါ့အလိင်တံကျင်းစီးဆင်းသည့်အခါငါ့အဒစ်လည်းယခုပိုကြီးလှပါတယ်။ ကိုယ့် 15 မိနစ်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူကခုန်ခဲ့သည်နောက်ဆုံးညဥ့်ကိုတကယ် horny ကြီးနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်လားတယ်။ ကိုယ့် Fast Forward မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်ဦး PIED ပြန်လည်နာလန်ထူ rewiring ထင်ကဒီနှင့်အတူဒါပျော်ရွှင်
လည်းလျော့နည်းစိုးရိမ်စိတ်ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချမှု, အာရုံစူးစိုက်မှု, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အခြားလှုပ်ရှားမှုများပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ထင်ရ
ခိုင်ခံ့နေဖို့ဒီ shit ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်
သင် PMO ကိုမစွန့်လွှတ်ခဲ့ပါက၎င်းသည်ပိုမိုကျန်းမာသောလိင်မှုဘ ၀ သို့ ဦး တည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါ PIED နှင့်အတူနှစ်ပေါင်းများစွာရုန်းကန်ခဲ့ရသည်, အကြောင်းရင်းသဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘဲ, အများအားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမှ attribute ။ ငါ fapping နှင့် porn ကနေပြောင်းရွှေ့ပြီးတာနဲ့ခွန်အားမရှိတော့ဘူး။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်တစ်လ (ရက်ပေါင်း ၃၀“ hard mode”) ကိုသင်အကြံပေးပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်နှစ်ယောက်စလုံးကိုပိုမိုချစ်ခင်တွယ်တာရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင်၏ဘဝတွင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမပါဘဲဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ ၎င်းသည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်လုံလောက်ပြီးမစောင့်နိုင်ပါ။
ငါ fapstinence နှင့်အတူတွေ့ရှိခဲ့သောအရာကိုငါ reset နှင့်စတင်ရန်အချိန်ရောက်လာသောအခါ, ငါ့စိုက်ထူအလွန်အစိုင်အခဲကြီးနှင့်အတွေ့အကြုံကအရမ်းမူးယစ်ခဲ့ကွောငျးငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုသံသယစရာအခွင့်အလမ်းမရှိခဲ့ဘူး။ ဒါဟာ sexy အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုညစ်ညမ်းစေတဲ့အသုံးအဆောင်မတိုင်မီဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ Hm …ဒီတစ်ခါလည်းဒါဖြစ်မယ်ထင်တယ်…ညစ်ညမ်းတဲ့ dopamine လိုသဘာဝတုန့်ပြန်မှုတွေကစူပါလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုအသုံးချဖို့အပြေးအလွှားရောက်သွားတယ်၊ ဒါနဲ့ပြန်လည်စတင်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်၊ အကယ်၍ သင်သည်ထိုရက်ပေါင်း ၃၀ ကိုသင်ကတိပြုပါကသင်သည်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ကြုံရသည့်သစ်တောသမားတစ် ဦး နှင့်တူမည်ဟုခံစားရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်လှပသော၊ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
တချို့ကအမှုအရာငါသင်ယူ: - ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုခြင်းမရှိဘဲ ၁၀ ရက် (သို့) ထိုထက်မကသွားတိုင်းအချိန်တိုင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလျောက်ပတ်စွာစိုက်ထူနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုရှောင်ခြင်းကကျွန်ုပ်ကို“ ကုသပေး” သော်လည်း၊ - ပြည့်တန်ဆာများသို့လည်ပတ်ခြင်းသည် porn ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်သင့်အားအသစ်အဆန်းများစွာပေးသည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်အလွန်စွဲလမ်းစေသည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးလွယ်ကူပါတယ်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ခံစားချက်များနှင့်နှောင်ကြိုးအပြုအမူများကိုလျစ်လျူရှုထားကြသည်။
- ငါ porn ကိုမကြာခဏတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အချိန်များတွင်လိင်ဆက်ဆံစဉ် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအချို့ခံစားရသည်။ ပုံမှန်အမျိုးသမီးများသည်များသောအားဖြင့်ပူလေ့မရှိသောကြောင့်သင်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနေသမျှကာလပတ်လုံးလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကာလအတွင်းစိုက်ထူခြင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်အခက်တွေ့နိုင်သည်ဟုသင်ယူဆနိုင်သည်။
- တစ်ဦး reboot အဘို့အသွားသည့်အခါ, ပြည့်တန်ဆာဖြတ်တစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်။ ငါပြည့်တန်ဆာမမပါဘဲ porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီး၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်း (သို့) မူးယစ်ခြင်းများကို ဦး တည်စေပြီးသင်ငွေအမြောက်အမြားသုံးစွဲသည်။ - သင်သည်သင်၏ပြည့်စုံမှုကိုပြည့်တန်ဆာများကိုစမ်းသပ်ရန်သွေးဆောင်ခံရလိမ့်မည်။ စိတ်မပူပါနဲ့ ငါ့ကိုယုံပါ၊ မင်းရဲ့ဒစ်ကခက်ခဲလိမ့်မယ်။ သင်၏အချိန်နှင့်ငွေကိုချွေတာပါ။ သင်ခက်ခဲသော အချိန်မှစ၍ သင်၏ရောဂါပျောက်ကင်းသည်ဟုသင်ထင်လိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင်သည်“ သီတင်းပတ်နှစ်ပတ်လုံးအစဉ်အမြဲရှောင်။ ပုံမှန်ပြန်သွားနိုင်သည်” ဖြစ်သောကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်ဆင်ခြေအဖြစ်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားခြင်းကသင့် ဦး နှောက်ကိုမျှတအောင်လုပ်ပြီးမလုပ်ချင်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ဟန်ချက်ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် PMO ရှည်လျားသောကာလကိုဖြတ်ကျော်ရန်လိုအပ်သည်ဟုယုံကြည်သည်။
90 နေ့ကအစီရင်ခံစာ: တစ်ဦး primal တတ်ပြီးပြန်ကိုင်ပြီးလွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ဒါကကြှနျုပျတို့အားလုံး NoFap နှင့်အတူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပါပဲ။ မဆိုအားကြီးသောလှောင်အိမ်နှင့်ရထားဖို့ခက်ခဲတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားကြောင်းတိုက်တွန်းကြသည်။ NoFap တစ်ဦးထိခိုက် PMO အလေ့အထမှုကိုနှိပ်ကွပ်အကြောင်းကိုမဖြောင့်, အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တကယ်လုပ်နေလုပ်နေကိုယျ့ကိုယျကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူသည်။
Day One: အဆိုပါရည်မှန်းချက် porn ခံစားဘို့တာဝန်ရှိငါ၏အဦးနှောက်ရဲ့အာရုံခံဆဲလျလမ်းကြောင်းအားနည်းစေရန်ဖြစ်ပါသည်နေ့ 1 (နိုဝင်ဘာလ 10, 2010) အပေါ်မှာငါ့ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ reboot လုပ်နေဘို့အကြှနျုပျ၏အကြောင်းပြချက်။ ငါ ED သွေးဆောင်ညစ်ညမ်းခဲ့, ငါ၏နောက်ဆုံး7မိတ်ဖက်အတူကခံစားခဲ့ရသည်။ ငါအမျိုးသမီးနှစ်ဦးနှင့်အတူစစ်မှန်သောဘဝ threesome အတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပေ။ ဒါကြောင့်ရှိပါတယ်။
ငါသည်ဤ subreddit အပေါ် YBOP တွေ့ကဿုံငါ၏အပြဿနာဖော်ပြထားသကဲ့သို့စောင့်ကြည့်။ ငါအောင်မြင်မှုအချို့ပုံပြင်များဖတ်ပါ။ ငါသည်ထိုနေ့ကျူးလွန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် (ပြီးသားတချို့ဖြစ်ကောင်းအမာခံပစ္စည်းပစ္စယမှသင်တန်း fapped ဘဲလျက်) နှင့်ငါ့အလိုရှိသမျှ porn ကိုဖျက်လိုက်ပါ။ 90GB ကြင်ခွဲထားခဲ့သည်နဲ့ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အစဉ်အမြဲငါကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးရေရှည်ရည်းစားကတည်းကအိပ်ခန်းထဲမှာဖျော်ဖြေဖို့တစ်ဦးကိုကွောကျရှံ့ခဲ့နဲ့ကျွန်မ5လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတက်ခြိုးဖဲ့၏။ ကျနော်တို့ဘက်မှာစစ်တိုက်သောအခါ, သူမမကြာခဏငါ့ကိုပြီးတော့ငါ့ကိုပြင်ကိုပိတျထားကဲ့ရဲ့လိမ့်မယ်။ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုပုဂ္ဂိုလ်ရေးပေမယ့်အမြဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြဘူး။
ကျွန်တော်ကွဲကွာပြီးတာနဲ့ငါ porn အမျိုးမျိုးတို့ကိုမှအကြီးအကျယ် fapping စတင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ငါယခုအောငျပွီခံစားရပြဿနာသို့တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်3လအတွင်းကျော်, ငါတိုက်ရိုက်ငါ၏အ reboot လုပ်ပါ related နေကြသည်ယုံကြည်သောငါ၏အတှေးအချေါအတွက်ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများကိုသတိထားမိကြပြီ
နေ့ 1: ငါထို့နောက်ငါပဲ FAP ဖို့ပဲအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူဖျော်ဖြေဖို့ကိုပိုပြီးကြောက်လန့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုဆိုရင်: ငါ FAP ဝံ့တယ်ဒါပေမယ့်ငါဖြည့်ဆည်းလာမယ့်မိန်းကလေးတစ်ဦးထဲကဦးနှောက် fucking အပေါ်စီစဉ်ထားသည်။
နေ့ 1: ငါ့ကိုညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲအပြည့်အဝစိုက်ထူသို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်အဘို့အကမဖြစ်နိုင်ကြပြီ။ အခုဆိုရင်: ငါပဲအချို့အတှေးနဲ့အလင်းထိထိမိမိနှင့်အတူခက်ခဲရနိုင်သည်။ ငါကူးယဉျကိုရပ်တန့်ပင်ပြီးနောက်ရှည်လျားသည်ဤစိုက်ထူနောက်ဆုံး။
ဤအရာသည်အလွန်အောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်သူတို့၏ချည်နှင့်ဆွေးနွေးမှုများဒီမှာလူတိုင်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ သူတို့ကိုမရှိရင်ငါတကယ်ကောငျးကြိုးအတှကျ PMO ဆေးလိပ်ဖြတ်နိုင်ပါပြီမဟုတ်ပေ။ ယခုဤငါချိုးဖျက်ဖို့ငြင်းဆန်တဲ့ကတိကဝတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအပြီးမှာငါရက်ပေါင်း ၉၀ လောက်ညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံကိုမရခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော့်ဘ ၀ ကတော်တော်တိုးတက်လာတယ်။ ငါရည်းစားနဲ့ပြိုကွဲသွားတယ်၊ မိန်းကလေး ၄ ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတယ်။ ငါပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်း၊ ယုံကြည်မှုရှိခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ လပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်သည်အလွန်များပြားသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံခဲ့ရသည်။ သို့သော်သူမဇန်နဝါရီလတွင်သူမနိုင်ငံသို့ပြန်ခဲ့ရသည်။
သူမထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ခံစားမှုတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေသို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ငါတစ်နေ့လျှင် ၂/၃ ကြိမ်ရိုက်ယူပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခဲ့သည် (၆ လအတွင်းကျွန်ုပ်မလုပ်ခဲ့သောအရာ) ဆုံးရှုံးမှု: အားလုံးသည်ထိုအရပ်မှအောက်သို့ဆင်းသွားခဲ့သည် အကွောငျးရငျး, စနေ, တနင်္ဂနွေမှထွက်မသွားဘဲကိုယ်အလေးချိန်နည်းတယ်စသည်ဖြင့်အခြားမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်…စိတ်ပျက်စရာတစ်ခုလို့ဆိုပါစို့။ ငါမလုပ်ခဲ့ဘူး၊
ဒီတော့အခုတော့အရင်ကထက်ပိုပြီးစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်၊ ငါ ၅ ရက်နေပြီးပြန်လာပြီ။ ငါ့အတွက်အကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်ကလိင်ဆက်ဆံတာ၊ ဒါကိုကျော်နိုင်ရင်ကိတ်မုန့်ပဲ။ ဒါပေမယ့်လိင်ပြီးနောက်တပ်မက် ... sh * t ကို,f* ck ။ ငါအများကြီးလုပ်ပေး မူးယစ်ဆေးဝါးများ များလွန်းခြင်း, fapping ကျိန်းသေရပ်တန့်ဖို့ခက်သည်။
ဒါကြောင့်သတိထားပါ ပြန်မနေပါနဲ့ တကယ်လို့မင်းဟာ fapping လို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်အပြင်ထွက်ပြီးစစ်မှန်သောလိင်ကိုရှာဖွေရန်သင်တတ်နိုင်သမျှလုပ်ပါ။ Fapping ကမတန်ပါဘူး
ကျွန်ုပ်၏ပြသနာသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆိုင်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်သည်၊ ဒါကြောင့်သင်ကဖြိုဖျက်တဲ့အခါမှာကျွန်မမှာ porn သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမဟုတ်ခဲ့ရင်ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစိုးရိမ်စရာမရှိဘူး။ ထိုကြောင့်ငါ၏ပြဿနာများ၏အမြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများ, ရန် ED နှင့် desensitization စေ porn ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ငါ့အ ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသရစတင်ကြောင်း, ငါ၏ယုံကြည်ကိုးစားထိုကြောင့်ငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစိုးရိမ်စိတ်လည်းလျော့နည်းသွားခဲ့ပါသည်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစိုးရိမ်စိတ်ငါ့ဦးခေါင်း၌ရှိ၏ သို့သော်ပညာရေးကိုလည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
1 ။ ငါကပိုအမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်
2 ။ အကြှနျုပျ၏လိင်တံငါ dopamine ဖို့ပိုအထိခိုက်မခံပေါ့, ငါ့လိင်တံကိုပိုမို receptors ကြီးထွားလာသောဤဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးထက်ပိုသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်အထိ related ပိုမိုထိခိုက်မခံတဲ့ဖြစ်ပါသည်
3 ။ ကလူစကားပြောဖို့ပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်
4 ။ အားကစားခန်းမမှာကိုပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်
6 ။ ငါတဖန်ငါ့စံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖို့အသုံးပြုကြောင်းမိန်းမတို့အားဆွဲဆောင်တယ်
7 ။ ငါကပိုကလူစကားပြောချင်
8 ။ ငါအများကြီးပိုပြီးယုံကြည်မှုပြောနေတာရှိသည်။ ငါပြီးသားသို့သော်ယခု steroids အပေါ်င်တော်တော်လေးယုံကြည်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
၉။ စွမ်းအင်ပိုမိုသင်အရက်သေစာသောက်စားခြင်းအကြောင်းစဉ်းစားမိလျှင်ထိုသူသည်ဒေါသထွက်ပြီးစိတ်ဆိုးလာကာသာမာန်လူတစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးသူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားအော်ဟစ်သည်။ သူတို့သည်မြင့်မားရန်အရက်ပိုလိုအပ်သည်။ အဆိုပါပြproblemနာကိုသူတို့ ဦး ခေါင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ် ဦး စလုံး၌တည်ရှိ၏။ အရက်သေစာသည်အရက်စွဲခြင်းကိုမဖယ်ရှားဘဲသာမန်မဟုတ်ပါ။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာလွယ်ကူတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုမပြုလုပ်နိူင်ခဲ့ပါဘူး။ ညစ်ညမ်းမှုကိုမဖယ်ရှားနိုင်ဘဲ reboot မလုပ်ဘဲနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့စိုးရိမ်မှုလည်းမရှိပါဘူး။ သင်သည်လိင်သဘာဝဖြစ်စဉ်ကိုအလွဲသုံးစားပြုနေပါသည်။ သငျသညျအော်ဂဇင်ပိုမိုနှိုးဆွလိုအပ်ပါတယ်နှင့်အပေါ်ခက်ခဲရ။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှသင်ပိုမိုခက်ခဲလာရန်နှိုးဆွခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပိုမိုလိုအပ်သည်။ ထိုအခါအစစ်အမှန်ဘဝရှိအမျိုးသမီးများသည်ကြာမြင့်စွာလာပြီးဘာမျှမဖြစ်လာပါ။ အဘယ်ကြောင့်? အလွယ်တကူရိုက်ကူးနိုင်သည့်အလွန့်အလွန်လွယ်ကူသောမိန်းမနှင့်လိင်တံစူးစူးဝါးဝါဒအော်ဂဇင်များ။
အဆိုပါပြproblemနာကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ် ဦး စလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကသင့်ရဲ့လိင်တံဟာ dopamine ကိုမထိခိုက်စေနိုင်လို့ပါ။ ဒါကြောင့်မို့အရင်ကလို receptor တွေများများစားစားမရှိတဲ့အတွက် hard ရဖို့ပိုပြီးလှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်တယ်။ PMO ဆိုတာ ED ကို ဦး တည်ရာ ED လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုဖြစ်စေတယ်။ ငါသေချာပေါက်သူမ၏လုပ်ပေးသွား, ငါ၌သင်တို့ကိုယောက်ျားတွေပြောပြရန်ကြီးစွာသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိသည်လိမ့်မယ်! ငါစာရေးခဲ့တာကတော့အလားတူပြproblemနာရှိနိုင်တဲ့အခြားလူများကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုနားလည်နိုင်ဖို့ပါ။
ယခုတွင်ငါသည်ငါ၏အ ED, ငါ့လာမယ့်ပြဿနာကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစိုးရိမ်စိတ်ကိုင်တွယ်ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဝေးသွားကြဖို့စတင်ကြောင်းသဘောတူသည်။
ငါမိန်းမတွေနဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာ ED ကိုသတိပြုမိလာတဲ့အခါငါတကယ်စိတ်ပူလာတယ် (ငါအသက် ၂၀ ကျော်ပြီ) ။ ငါကြည့်လိုက်တော့ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတွေ့တယ်၊ ဗီဒီယိုအားလုံးကိုကြည့်ခဲ့တယ်၊ ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မှာပါဝင်တယ်။ ၂ ပတ်လောက်အကြာမှာငါ့ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားပြီလို့ငါပြောနိုင်တယ်။ ငါအရင်ကထက်ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ အမျိုးသမီးတွေကငါ့ကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်တယ်၊ အိပ်ခန်းမှာတိုးတက်မှုအများကြီးမြင်တယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပိုကောင်းလာပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် porn နှင့်အလွန်တွဲဖက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်မည်မျှရယ်စရာဖြစ်နေသည်ကိုသတိပြုမိသည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွဲလမ်းစေသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသူတစ် ဦး အဖြစ်တစ်ခါမှမစဉ်းစားခဲ့ပါ၊ အစာကောင်းကောင်းမစားနိုင်၊ အစာမရှိသောအစားအစာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုချိတ်ဆက်မိခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်၏ ၀ တ်ပြုမှုကိုစွဲလမ်းစေသည်ဟုမည်သည့်အခါကမျှမယူမှတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်စိတ် ၀ င်စားပါသည်။ ဒီဟာကိုရင်းနှီးသောသူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေပြီးငါတို့အားလုံးက 'စိန်ခေါ်မှု' ကိုလုပ်နေတယ်၊ ​​ဒါကကောင်းကျိုးများစွာရရှိစေသည်။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၀ ကျော်သောဂီတပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်မှတ်မိနိုင်သည့်အချိန်ကတည်းကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ဘဝနှင့် ပတ်သက်၍ ပြaနာရှိခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာငါ၌တကယ့်ရည်းစားမရှိခဲ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျန်းမာသောလိင်မဖွံ့ဖြိုးသေးကြောင်းကိုလည်းသင်ပြောနိုင်သည်။ ငါတဆယ်သုံးနှစ်အရွယ်ကတည်းကပုံမှန်နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာတွေလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါအများစုမလုပ်ခဲ့ပေမယ့်တစ်ပတ်မှာ ၁-၃ ကြိမ်လောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်၊ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာတောင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။
ငါ 23 များ၏အသက်အရွယ်န်းကျင်တုန်းကငါမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံခဲ့ထိုနောကျမှကိုယ်တဦးတည်းညဥ့်ကနေအချိန်ကလစုံတွဲမှရပ်တည်အထိတိုတောင်းသောသက်တမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး၏သောင်းချီရှိခဲ့ပါပြီ။ အထူးသဖြင့်အစအဦးအတွက်ကိုယ့်မိန်းကလေးများအပေါ်တစ်ဦးအရူးအမူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အသုံးပြု, ဒါပေမယ့်တော်တော်များများမအောင်မြင်မှုများထိုနောက်ငါခံစားချက်တွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မသင်ယူပြီးအလွန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကထားရှိမည်။ မှာအားလုံးပါလျှင်ကျွန်မထှတျအထိပျဖို့အတှကျကအလွန်ခက်ခဲခဲ့ကြောင်းထွက်တွေ့များသောအားဖြင့်ကဈ orgasm နိုင်မှသာအချိန်ကြာမြင့်စွာပြီးနောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ခဏတစ်ပြီးတဲ့နောက်ငါ orgasm ပေါ်တက်ကိုပေး၏, မိန်းမများအပေါ်သာအာရုံစူးစိုက်။ သငျသညျစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်ကြောင့်ခဏတစ်ပြီးနောက်အတော်လေးပျင်းစရာကောင်းတယ်, အခြားသောပြီးနောက်သိမျးပိုကျ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုနိမ့်နှင့်အနိမ့်တယ်။
2 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းန်းကျင်ငါဒီနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ယုံကြည်ဖို့စတင်ခဲ့ငါနှင့်အတူမှားယွင်းနေသည်အဘယ်အရာကိုထွက်ရှာရန်ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်ရှာဖွေနေဝိညာဉျကိုစတင်ခဲ့သည်။ ငါကခက်ခဲမိန်းမတို့အားခံစားချက်တွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကိုတွေ့, ငါတစ်ဦးပျောက်ဆုံးအကြောင်းမရှိနဲ့တူခံစားစတင်ခဲ့ပြီးအလုပ်လုပ်နှင့်ဝါသနာပေါ်မှာအများကြီးအာရုံစူးစိုက်။ ငါနေဆဲရက်စွဲများအပေါ် သွား. , တောင်နီးပါး6လကြာကောင်းတစ်ဦးမိန်းမနှင့်တဦးကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပေမယ့်ပိုပြီးလိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ခင်မင်မှုနဲ့တူခံစားခဲ့ရကြောင့်လည်းသွေ့ခြောက်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်သည်လုံးဝသောက်ခြင်းကိုလုံးဝမစွန့်လွှတ်ဘဲပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့်ဘာဝနာနှင့်ကိုယ်ခံပညာကိုစတင်ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ခံစားချက်အသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်အာရုံတွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ ဒါကငါ့အတွက်အဓိကပြproblemနာဖြစ်တယ်။ ငါလပေါင်းများစွာအကြာကပေးကမ်းကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ငါတကယ် dopamines ၏အဘို့ကိုတောင့်သကဲ့သို့, တစ်ပါတ်သို့မဟုတ်ဒီတော့နောက်မှပြန်ရတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲငါကြည့်ရတာခက်တဲ့အမာခံပစ္စည်းတွေကကျွန်မကိုတကယ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပိုလိုချင်တာပဲ။ ထိုအခါငါ YBOP site ကိုသတိရနှင့်ထိုအရပ်မှငါသည်ဤ site ကိုသို့သွားလာ။ ငါပြောချင်တာကဒီ site ရှိအရာအားလုံးဟာငါ့အတွက်တကယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။
လွန်ခဲ့သော ၄ ပတ်ခန့်ကကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီးနောက်မှပြန်ကြည့်ရှုခြင်းမရှိပါ။ ဒီရက်သတ္တပတ်များဟာဆုတ်ခွာခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများကြီးမားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အတွက်တော့ခက်ခဲပါသည်။ အခုအချိန်အထိငါအိပ်မပျော်, အပြာရောင်ဘောလုံး, လိင်တံနာကျင်ကိုက်ခဲ, ဆီးဖို့တိုက်တွန်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မိုးသည်းထန်စွာစိတ်ဓာတ်အပြောင်းအလဲများကို။ တစ်ခါတလေငါအရမ်းချိုလွန်းသည်ဟုခံစားရ, ငါနှင့်ပတ်သက်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ! အရင်ကငါအဲဒီခံစားချက်ကို MOing နဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ဖူးသလိုအခုငါဟာစစ်မှန်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်အကြောင်းစဉ်းစားနေတယ်။ ငါကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးကိုပဲတွေးပြီးနိုးလာတယ်။ ဒါ့အပြင်ငါဘာမှ porn မကြည့်ချင်ခဲ့ဘူး, ငါမတော်တဆတွေ့မြင်လျှင်တစ် ဦး အဝတ်အချည်းစည်းဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုမြင်လျှင်ငါ MO ကိုမှတိုက်တွန်းမရခဲ့ပေ။ အကြှနျုပျ၏နံနက်တောအုပ်ပြန်လာကြပြီးသူတို့အကြီးအကျယ် are Insomuch ကြောင့်ငါ့အဘို့ပြaနာတစ်ခုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်။
မကြာသေးမီကငါကြိုက်နှစ်သက်ပုံရသောမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လိင်မဆက်ဆံရသေးဘူး၊ သိပ်မပြောသေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူမနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်နေရတာ၊ သူမနဲ့အတူငါကခုန်နေတဲ့အခါသူမရဲ့စွမ်းအင်ကိုခံစားမိပုံရတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အိပ်မပျော်မှုတွေကကျွန်တော့်ကိုတစ်ခါတစ်ရံ crumpy၊ ပြီးတော့သူမဇွန်းနဲ့အိပ်နေချိန်မှာအိပ်မောကျတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့သူကပြောတယ်ညလုံးတစ်ညလုံးကျွန်တော်ခက်ခဲခဲ့တယ်။
ငါဟာဒီထက်ပိုပြီးလွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်သူမကငါ့ကိုအကဲဖြတ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ငါမျှော်လင့်မိတယ်။ အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်ဘဝမှညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်မကောင်းဖြစ်သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်ပျော်ရွှင်မိရန်ကြိုးစားနေသည်။
ညစ်ညမ်း / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းက ED ကိုဖြစ်ပေါ်စေသလား။ LINK - quarantine အားဖြင့်
ငါ ၁၁၅ ရက်အောင်မြင်ပြီ။ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်က ၁၀ နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံစဉ် (အော်ဂဇင်) နိုင်ခဲ့သည် (၂၀၀၂၊ ကျွန်ုပ်သည် ၂၃ နှစ်၊ ကျွန်ုပ်သည်ယခုအသက် ၃၃ နှစ်),
နောက်တဖန်ပြန်လာလိမ့်မည်ဟုငါမထင်ခဲ့ပါဘူး reboot က fellas တွေအလုပ်လုပ်တယ်။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏ (၁၀) နှစ်ကြာအမှန်တကယ်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ကိုမပျော်နိုင်သောကြောင့်၊ မည်သူနှင့်မည်သူကိုငါလွတ်သွားသနည်း၊ မည်သူကမည်သူသိသနည်း၊ ညစ်ညမ်းမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အခြေခံအားဖြင့်ထုံထိုင်းခြင်း၊ စိုစွတ်သောခေါက်ဆွဲကိုသွားလိမ့်မယ်အစာရှောင်သွား၏။
ကြောင်း၏ 10 နှစ် !! ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်တော့မှလိင်ဆက်ဆံတာဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကိုသိထားတဲ့အတွက်ငါချိန်းတွေ့ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတိုင်းမှစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရိုက်ချက်၊ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်းမိန်းကလေးငယ်များအတွင်း၌အော်ဂဇင်အတုများပြုလုပ်ခြင်းသည်အလွန်အမင်းပျော်မွေ့မှု၊ ကောင်းပြီနောက်ဆုံးညဥ့်ငါလုပ်ခဲ့တယ်! အခန်းတစ်ခန်းအသစ်ယခုစတင်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်သေခြင်းချုပ်ခြင်း (တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း) ပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊
ငါဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူး၊ ငါထင်တာထက်ငါ့ကိုလုယက်ခဲ့တယ် ယခုတွင်ငါသည်လိင်ထပ်မံပျော်မွေ့နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်၏စိတ်နှင့်ယုံကြည်မှုကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ဒီ reboot ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် yourbrainonporn.com porn သည်သင်နားလည်နိုင်သည်ထက်ပိုမိုပျက်စီးစေတယ်၊ ​​reboot လုပ်ပါ၊ ငါအံ့ 'မိတယ်၊ ငါသူ့နေ့ရက်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားခဲ့ဘူး၊ မမှန်ဘူး ဒီတစ်စုံတစ်ယောက်သည်ကောင်းသောအရာအတွက် porn ဖြတ်တောက်နိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်
ပျောက်ကင်းသွားပြီ - အကူအညီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အသက် ၁၃ နှစ်မှ ၂၃ နှစ်ကြား PMO
နောက်ဆုံးမှာတစ် relapse မှဦးဆောင်ရသောပျင်းထဲက M ကို, 60 ရက်ပေါင်းသွားပါ။ (ကျနော်ပြန်ရောက်သွားတယ်ပေမယ့်, ငါ abstinence ၏ 100 ရက်ပေါင်းနေဆဲရေရှည်မှာအကျိုးရှိခဲ့ 60% သေချာပါ၏။ )
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၆၀ ထပ်မံသွားပြီး MOing ကိုတစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်အလိုမလိုက်ပါ။ အခု ၈၅ ခုအကြောင်းပြောမယ် ကျွန်တော့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကမင်းကငါ့ရဲ့လိင်စိတ်ကို 'နိုးထ' ဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။
- မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ပြုလုပ်နေစဉ်ခဲယဉ်းပါ
- မနေ့ကမိန်းကလေးမပြန်မီမွန်းလွဲနှစ်ကြိမ် MO လုပ်ပြီးမမျှော်လင့်ဘဲခေါင်းကိုရလိုက်သည်၊ ၁၀၀% အချိန်တစ်ပြိုင်တည်းစိုက်သည်။
နောက်ဆုံးညဥ့်ပြီးနောက်ကျွန်မကျိန်းသေ PIED ၏ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနေပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏အရေးအကြီးဆုံးအကြံပေးချက်မှာတစ်နေ့လျှင် ၂၀ မိနစ်မှ ၃၀ မိနစ်အတွင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်နှင့်တစ်ပတ်လျှင် ၆၀ မှ ၇၅ မိနစ်အတွင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ငါရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်ပြီ ဘယ်မှာငါ့အမူလရည်မှန်းချက်။ ငါဒီကာလအတွင်းသုံးထပ်တလဲလဲရှိခဲ့ပါတယ် ငါမူးရူးဘယ်မှာတစ်ခုမှာအဓိက။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်က
ငါပြန်လာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ငါတကယ်ယုံတယ် အကယ်၍ သင်ရေရှည်အောင်မြင်လိုလျှင်ဘာကြောင့်ပြန်ပြောင်းရလဲဆိုတာကိုလေ့လာရန်အတွေ့အကြုံနှင့်အခွင့်အရေးသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေဆီကနေကျွန်တော်အများကြီးသင်ယူခဲ့ရပါတယ်။ ငါပြန်လာပြီကနေအများကြီးသင်ယူခဲ့တယ် အထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးတစ်ခု။
ငါပျောက်ကင်းသွားပြီလား ဟင့်အင်း၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီကတည်းကယခုကျွန်ုပ်မလုပ်ပါ။ Marnie ကငါ့ဘောလုံးတွေကိုအားစိုက်ထုတ်နေတယ်၊ ထိုအဟုတ်မှန်ပေမယ့်ငါဆင်ခြေအောင်ခဲ့သည်။ ငါ့ကိုခွေးရိုက်ခိုင်းတဲ့တစ်ယောက်ယောက်ငါထိုက်တယ်
ဒါကြောင့်ငါမပျောက်ကင်းဘူး ဒါပေမယ့်ငါအရမ်းအံ့သြမိတယ်၊ အမျိုးသမီးတွေ၊ ငါနဲ့ကမ္ဘာကိုကွဲပြားတဲ့နည်းနဲ့မြင်တယ်။ အကြှနျုပျ၏စိုက်ထူပြန်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကြီးမားတဲ့အချိန်ပြန်ဖြစ်ကြသည်။ တောင်မှမစ္စတာဂျွန်ဆင်သာမန်နေ့အခွအေနေဘယ်နေရာမှာထဲကပေါ်လာတက်ပြီးဆက်လက်သောအချက်အထိ။ Awesome !!
စိုက်ထူ ၉၀ မှ ၉၈% ကြားရှိပြီးကြာရှည်ခံသည်။ ကောင်းတယ်!
အခြေခံအားဖြင့်ပြောရရင်ဒါဟာငါဟာဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတစ်ခုတည်းသောအရာကတော့ငါ PMO-fog ၌နှစ်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါနဲ့သွားဒီ nofap / မရှိ, ညနေ (ဏ) အရာစောင့်ရှောက်မည်။
၂၄ ရက်ရှိပြီ ငါ nofap ကိုစကတည်းကငါကျောင်းစတက်ပြီးငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးအလုပ်များနေလို့ငါ့ကောင်မလေးကိုခဏတာတကယ်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့်မနေ့ကငါတို့နောက်ဆုံးမှာအတူတကွစုရုံးတဲ့အခါမှာဒါဟာအံ့သြစရာပဲ။ ငါသူမကိုအများကြီးစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်, ငါ ED နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကိစ္စများရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မမှာအံ့ int စရာကောင်းလောက်အောင်ရင်းနှီးတဲ့ညရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်မသူ့ကိုအမြဲတမ်းချစ်ခင်တွယ်တာမှုကိုတကယ်ပြနိုင်တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ nofap သည်မိန်းမများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်မှော်ကုသနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်မယုံကြည်ပါ။ ငါထင်တာကမိုက်မဲတာပဲ၊ ဒါပေမဲ့ဒီအစီအစဉ်ကတကယ်အကျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်၊ အဲဒီရလဒ်တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရလို့ဝမ်းသာတယ်။
အစဉ်အဆက်အကောင်းဆုံးလိင် !! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, NoFap!
ကိုယ့်နောက်ကျောတစ်5ရက်ကြာအလုပ်ညီလာခံကနေရတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ငါတစျခုလုံးကိုအချိန် fapping ခဲ့ကြလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါလွှတ်ခဲ့စဉ်ငါ၏အခါးပတ်အောက်မှာပြီးသားတစ်ပါတ်နှင့်အတူငါမ PMO မှကျူးလွန်ခဲ့သည်။ အနည်းငယ်ပြန်ဇာတ်လမ်းကို: လွန်ခဲ့သောတနင်္ဂနွေနေ့ကကျွန်ုပ်သည်ဆက်ဆံရေးတွင် ၅ နှစ်ခန့်ရှိခဲ့ပြီး၊ ဓာတုဗေဒနွမ်းပါးမှုရှိမရှိမကြာသေးမီကမှကျွန်ုပ်စတင်တွေးတောမိသည်။ သို့သော် NoFap မတိုင်မီဖြစ်ခဲ့သည်။ မနေ့ကငါပြန်ညီလာခံကနေရောက်တဲ့အခါငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အဝပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည်ယုံကြည်, လိင်ထဲကကျောထောက်နောက်ခံငါ့ကိုအဓိပ်ပာကြလိမ့်မယ်လို့အတိတ်ကာလ။ ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ငါရှာတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ဘယ်တော့မှစွမ်းအင်တစ်ခုအတွင်းရေလှောင်ကန်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါလိင်, မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အသည်းအသန်နှင့်မယုံနိုင်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၀ ရှိသကဲ့သို့တဖန်ခံစားခဲ့ရသည်။ ဤကဲ့သို့သောအချိန်များတွင်လိင်ဆက်ဆံရန် ၅ နှစ်“ ငြီးငွေ့လွန်း” ပြီးသောအခါယခုပြtheနာသည်ဓာတုဗေဒနွမ်းနယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်၏လိင်စွမ်းအင်ကိုအချိန်တိုင်းဖြုန်းတီးခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် NoFap! မင်းကငါ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတိုးတက်စေပြီးကျွန်မရဲ့လိင်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။
19 နေ့အစီရင်ခံစာ, NoFap ပြီးနောက်ပထမဦးစွာ PIV လိင် (Erectile အလုပ်မဖြစ်)
အမျိုးသား, 23 ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကငါ ED ရောဂါခံစားခဲ့ရပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာ porn and masturbation ပြီးနောက် NoFap ကိုစတင်ခဲ့တယ်။ ဒီည NoFap ကိုစကတည်းကကျွန်မရဲ့ပထမဆုံး PIV လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ထင်ပါတယ်။ ဤသည်မှာ ၁၉ ရက်ကြာ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ရန်လုံးဝအားမပေးပါ။ ငါသည်လည်းအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်းကိုခံစားခဲ့ရပြီးကွန်ဒုံးကိုဝတ်ထားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူခြင်းကိုသေစေသည်။ သို့သော်ယနေ့ညကျွန်ုပ်သည်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲကြာရှည်စွာနေခဲ့ပြီးတစ်လျှောက်လုံးခက်ခဲစွာနေခဲ့သည်။ ဘယ်သင်ခန်းစာပဲ! ကျွန်တော့်အတွက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမရွိပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်,
ရည်းစားနဲ့ကျွန်မ NoFap မှ ED ကျေးဇူးတင်စကားထံမှခြောက်သွေ့သောစာလုံးပေါင်းပြီးနောက်ကြီးမားတဲ့လိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာအတွက်ဆွဲထား!
အကျဉ်းသမိုင်း: ငါကပိုထက်တစ်နှစ်အဘို့သန့်ရှင်းဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်ငါ၏အရည်းစားနှင့်အတူပြန်ရတယ်။ ငါနောက်ကျော porn ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသို့အကြီးအကျယ်တယ်ပေးသောစဉ်အတွင်းတစ်နှစ်ကြာ။ ကျနော်တို့အတူတူပြန်ရတယ်ပြီးနောက်, ငါ ED နှင့်အတူမကောင်းတဲ့ပြဿနာတွေရှိခြင်းခဲ့သည်။ ငါကစိုးရိမ်ရာမှဖွင့်စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ပေမယ့်ငါကဖြစ်ပျက်ခဲ့လိုက်တယ်သလိုပဲကြောင်းသူမ၏နှင့်အတူဒါအဆင်ပြေဖြစ်ကြောင်းကိုသော်လည်း။ ဒါပေမယ့်အဲဒီအကြောင်းသုံးပတ်အကြာသည်အထိဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ လွန်ခဲ့သောသုံးပတ်ခန့်ကကျွန်ုပ်သည်“ သင့် ဦး နှောက်ညစ်ညမ်းမှုအကြောင်း” အကြောင်းလေ့လာခဲ့သည်။ TED ဟောပြောချက်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော့်မျက်စိကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ ငါနှစ်ပတ်ကျော်အတွင်းယခု fapped ကြပြီမဟုတ်။
ဒီတနင်္ဂနွေမှာသူမမိုင် ၁၀၀ လောက်ကနေပြီးကျွန်မရဲ့ရည်းစားကိုသွားတွေ့တယ်။ ကျွန်မတို့ကအရမ်းကိုလိင်ဆက်ဆံတယ်။ ငါသူမကိုနောက်တဖန်သူမ၏အဝတ်အချည်းစည်းကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်ဖွင့်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လုပ်နေတာတပြင်လုံးကိုငါခက်ခဲခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ AND, ငါတို့တစ်ပြိုင်နက် orgas ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်သူမလာလိမ့်မည်၊ ထို့နောက်သူမပင်ပန်းနေသောလိင်တံကိုခံစားမိစေရန်နောက်ထပ် ၁၅ မိနစ်ခန့်သူ့ကိုခုန်။ ထိုင်နေသည်။ (ဒါမှမဟုတ်ငါအားလျော့နေလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့မှာလိင်ဆက်ဆံမှုလုံးဝမရှိခဲ့ဘူး) ။
နေ့ ၃၂ ရက်တွင်အောင်မြင်မှုအဖြစ်အပျက် - ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်ကိုအမြဲတမ်းလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုဝေမျှနိုင်သည့်အတွက် ၀ မ်းသာမိသည်။
၂၃ နှစ်ရှိပြီ ငါအသက် ၁၃ နှစ်ကတည်းက PMO ပျှမ်းမျှ ၁.၅ ကြိမ်တစ်နေ့လျှင် PMO ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်အတွင်း ၈ ကြိမ်ခန့်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အိပ်ရာခင်းခဲ့သည်။ အချိန်တိုင်း (ED) လုပ်ဆောင်ရန်မအောင်မြင်ပါ။ ငါထနိုင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းမိန်းကလေးများအိမ်သို့ခေါ်သွားသည်၊ သို့သော်လုံးဝကြိုးစားကြည့်ခြင်းထက် ပို၍ ကြည့်ကောင်းသည်။ မိန်းကလေးချိန်းတွေ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မူ၎င်းသည်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ချေ။ ငါဆက်တိုက်အခါသမယအတွက်ဖျော်ဖြေဖို့ပျက်ကွက်မှုအတွက်အကြောင်းပြချက်နှင့်အတူငါတက်နိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်နည်းလမ်းမရှိပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမ ၀ င်ဘူးလို့ဟန်ဆောင်ပြီးသူတို့ကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုတယ်။
သူငယ်ချင်းများ (အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ) နှင့်မိသားစုများကြား၊ ဒီဟာကအခန်းထဲမှာဆင်ကြီးကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါကလူမှုရေး၊ ဆွဲဆောင်မှုကောင်းတဲ့ကောင်လေးပါ၊ ဒါပေမယ့်ဒါကြောင့်ချိန်းတွေ့တာကိုရှောင်ရှားခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်တာကာလကကျွန်ုပ်အားအလွန်အမင်းစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောနေ့တစ်နေ့မျှမရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ဘဝအရည်အသွေးကိုသိသိသာသာထိခိုက်ခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံးတော့ NoFap ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၃၅ ရက်ကဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးမကြာခင်မှာပဲတခြားသူတွေလိုပဲကျွန်မဟာအခြေအနေတစ်ခုမှာပထမဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာလိုက်ရှာခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းရတော့မယ်၊ ။ နေ့ ၁၂ ရက်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်ုပ်ကျရှုံးခဲ့ပြီးသူနှင့်စကားမပြောတော့ပါ။ နှစ်ပတ်ကြာပြီးတဲ့နောက်ငါတို့စကားစပြောကြတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်သောကြာနေ့ကသူမကိုအိမ်သို့ခေါ်လာပြီးမည်သည့်ဆက်ဆံရေးတွင်မဆိုနောက်ဆုံးကောက်ရိုးဖြစ်မည့်အရာအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ငါနောက်တဖန်ကျရှုံးလိမ့်မယ်သိတယ်နှင့်ပါလိမ့်မယ်။ များများစားစားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်ကိုသောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်ကျွန်တော်ဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုဘဲလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။
ငါသွားရမယ့်လမ်းတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်ဆိုတာသိတယ်၊ ဒါကငါ့ကိုပြန်မလှည့်နိုင်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအဲ့တာကငါဟာအချိန်အတန်ကြာခဲ့ဖူးတဲ့ဘ ၀ အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲပြောဖို့လိုတယ်။ အခုတော့ကျွန်မငပဲကိုစုပ်ယူနိုင်ပြီ၊ ဒီကမ္ဘာရဲ့လှပတဲ့သွင်ပြင်အသစ်တစ်ခုကငါ့အတွက်ပွင့်လင်းလာတယ်။ စိတ်သက်သာမှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုတို့ကိုမဖော်ပြနိုင်ပါ။ ငါအရင်ကလိုပြောခဲ့သလိုငါအမြဲတမ်းမယုံကြည်ခဲ့ဘူး၊ NoFap fucking အလုပ်လုပ်တယ်။ PMO သံသရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုဘာလုပ်သလဲဆိုတာကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေတယ်၊ ​​အဲဒါကိုရိုးရှင်းစွာချိုးဖျက်ခြင်းကကျွန်ုပ်တို့ကို“ ပုံမှန်” ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာအံ့သြစရာပါပဲ။ ဒီ subreddit အပေါ်လူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရန်သွေးဆောင်ခံရသူများအနေဖြင့်၊ မင်းကမင်းတို့ရဲ့အစဉ်မပြတ်ကြားနေရတာကိုငါသိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချပါ၊ အဲဒါကိုစွဲမြဲစွာကိုင်ထားပါ (ငါ့ကိုကြည့်ပါ၊ ရက် ၃၂ ​​သာကြည့်ပါ) မင်းရဲ့ဘဝပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ဤအရာသည်ငါတို့အတွက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သည်။
138 ရက်, တိုးတက်မှုရှိသောကျောက်-အစိုင်အခဲသက်သေအထောက်အထား
ပြီးခဲ့သည့်ညကကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးစစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုတွေ့ခဲ့ရပြီး ၁၃၈ ရက်အကြာကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးပြန်လည်စတင်ခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ ငါအနည်းငယ်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သည်ယခုအချိန်တွင်မှတက် ဦး ဆောင်နေချိန်မှာငါအတန်ငယ်ပြားချပ်ချပ်နေဆဲဖြစ်အံ့သောငှါမကြာသေးမီကသဘောပေါက်ခဲ့ကြသောကြောင့်, သို့သော်ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်မှုများသည်မလိုလားအပ်သောအရာဖြစ်သည်။ ညနေခင်းမှာ ROCK-SOLID သက်သေအထောက်အထားကိုကျွန်ုပ်ပြန်လည်ဟန်ချက်ညီအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ရှည်လျားသောအရာဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ ED ဆေးများမလိုအပ်ပါ။ အခြေအနေပေါ်လာတဲ့အခါငါနိုးလာတယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်ကတုံ့ပြန်တယ်၊
ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ reboot တစ်ခုလုံးသည် MO မရှိခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည် MO ကိုအနည်းဆုံး ၃ ပတ်မျှမထားခဲ့ပါ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ခေါင်းပေါ်သို့ ၀ င်လာသည့်ညစ်ညမ်းလမ်းကြောင်းအချို့ထက်အမှန်တကယ်အခြေအနေနှင့်သာသက်ဆိုင်သည့်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ဤတွေ့ကြုံမှု၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုများသည်ထူးခြားသည်။ အဆိုပါဇယားတက်ဝမ်းခွဲ။ တကယ်တော့ငါဟာ> ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အနာတရဖြစ်အောင် ၃ ပတ်လောက်တောင်မှမတွေ့ခဲ့ဖူးဘူး၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ငါနောက်ဆုံးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်တဲ့အချိန်ကစပြီးသူ့ရဲ့ရုပ်ဆင်းသွင်ပြင်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ပတ်ပတ်လည်အားလုံး: ကြောက်မက်ဘွယ်။ ငါဒီနေ့လက်ကမ်းစာစောင်တွေစီးနေတာပဲ ငါ PMO ဆေးလိပ်ဖြတ်ငါ့အဘို့မူလကပင်ကောင်းသောအရာကြောင်းကိုသေချာပြီးသားဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ရှေ့တွင်တကယ့်ကြီးကျယ်သောလိင်ဆက်ဆံမှုရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးနှစ်များကိုမဖြုန်းတီးပစ်ခြင်း (ကျွန်ုပ်၌ယခင်ကမရှိခဲ့ဖူးသော) ပိုမိုပြင်းထန်သောခံစားချက်ရှိသည်။ ထို ... ။ အကျင့်ကိုကျင့်ပြန်ညှိ။
သာ 16 ရက်ပေါင်းမျှ PMO ပြီးနောက်တစ်နှစ်ထက် သာ. ပထမဦးစွာသင့်လျော်သောလိင်ယနေ့ည
ကျွန်တော်ဒီညဝမ်းသာပါတယ် ငါ PIED ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Viagra မရှိဘဲတစ်နှစ်ကျော်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုပါ။ ဒီညကျွန်တော် ၁၀၀ ရာနှုန်းအလွန်ခက်ခဲတဲ့နေရာမရှိတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံခဲ့ရတယ် !! ၁၆ ရက်သာကြာသည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်ဟာခက်ခက်ခဲခဲနေပြီးခေါင်းထဲမှာစိတ်ကူးယဉ်ပုံတွေမသုံးဘဲ cum လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီဟာငါ့အတွက်ကြားဖူးတယ်
၁၆ ရက်သာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ဒီလောက်တိုးတက်မှုရခဲ့တယ်ဆိုတာမယုံနိုင်ဘူး၊ ငါ့ခရီးကိုဆက်လျှောက်လှမ်းဖို့အားပေးမှုများစွာပါပဲ။
ရုံခက်ခဲ mode ကို၏2လအကြာ, ငါ့မိန်းကလေးနှင့်အတူလိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ Nofap ငါ့အဘို့ပြုတော်မူပြီအဘယ်အရာကိုချစ်ကြတယ်။
ကျနော်တို့ဒီခဏစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြပြီ ကျွန်ုပ်သည်သူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီရက်ပေါင်း ၉၀ လုံးလုံးစောင့်နေခဲ့ရသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်အပြည့်အဝပျောက်ကွယ်သွားစေရန်သေချာခဲ့သော်လည်းလူကိုအရှက်ခွဲခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၀ အရွယ်ကောလိပ်ကျောင်းသားဖြစ်ပြီးသန္ဓေတည်ခြင်းမရှိဘဲနှစ်လကြာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်ကအပျိုဖော်ဝင်ဝင်ချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်အခွံမာသီးမရှိဘဲ ၂၄ နာရီထက် ပို၍ မသွားနိုင်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရမ်းဂုဏ်ယူတယ် လိင်ကိစ္စသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းအပေါ်အနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုတကယ်နှေးကွေးစေချင်ပါသည်။ မနေ့ညကလိင်ဆက်ဆံတာကအံ့သြစရာကောင်းတယ်၊ ငါခဏတာထပ်လုပ်ချင်တယ်လို့မထင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏စွမ်းအင်အဆင့်ကိုတက်စေလို။ ကျွန်ုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အတိုင်းလုပ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုကိုခံယူလိုသည်။
ငါ chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုအနည်းငယ်သတိထားမိသည်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သောနှစ်လ PMO မရှိခြင်းကကျွန်ုပ်အားရှေ့သို့ဆက်ရန်လိုအပ်နေသောအရှိန်အဟုန်ကိုပေးသည်။ တစ်ခါတလေအပျက်သဘောအတွေးပုံစံတွေကိုငါစွဲစွဲလမ်းနေတုန်းပဲ၊ ငါဟာခရီးရှည်ကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူး၊ ဒါကအချိန်အတော်ကြာတော့ဖြစ်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါဟာငါ့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့လို့ငါ့ကိုဂုဏ်ယူမိတယ်။ ငါသွားရမယ့်လမ်းကရှည်တယ်။
သင်အခုမကောင်းတဲ့နေရာအရပ်၌ရှိကြ၏လျှင်, ငါသည်အလင်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအဆုံးတွင်လည်းမရှိ, သင်အချင်းလူကိုပြောပြ, ငါ့အဘို့ထိုအရပ်၌ဖြစ်ခြင်းဘို့သင့်ကိုလူအပေါင်းတို့အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ တောင်မှတစ်ဝက်အလင်းကိုမြင် START ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမှတဆင့်။ 🙂
ဈယခုအလုပ်လုပ်တယ် 95% သေချာဖြစ်ကြောင်းကို
ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာမလိုချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဒါကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်။ ငါဒီခရီးကိုဇွန်လမှာစခဲ့တယ်။ ဒါမှမဟုတ် nofap အကြောင်းဇွန်လမှာစခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်အတော်လေးစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်၊ ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားခဲ့ပါစေအသက်ကယ်မိန်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမပြောတတ်၊ မနက်ခင်းထင်းတွေလည်းဒီလိုမျိုးဘာမှမလုပ်ဖူးပေမယ့်တစ်နေ့ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာ porn နဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူး။ ဒါက testosterone ဟော်မုန်းချို့တဲ့လို့လား။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ငါဟာစိတ်ဓာတ်ကျမှုအတော်များများကိုခံစားခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်လိုခံစားခဲ့ရတယ်။
နောက်ကျောကျနော်ပထမဦးဆုံးအဘယ်သူမျှမ FAP အကြောင်းဖတ်ရသောအခါ, ဇွန်လထဲမှာငါကထွက်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ်သာထို့နောက်တဖန်ငါစိတ်ကျရောဂါနှင့် relapse ခက်တဲ့ start မယ်လို့များသောအားဖြင့် 10-3 ရက်, ပြန်ပြီးတော့ငါ့အစံချိန်ဖြစ်သည့် max ကို4နေ့ရက်ကာလအဘို့ကြာရှည်လိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ဇူလိုင်လအတွင်း nofap နောက်တဖန်အပ်ပြန် testosterone ဟော်မုန်းချို့တဲ့အကြောင်းကိုငါ့အဟောင်းများကိုသီအိုရီထံသို့ ဝင်. , ဒီတောင်ငါပြီးသားပြန်ပြီးတော့ Tho တချို့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပျက်သည့်ထိုကဲ့သို့သောအမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပေါ်ခဲရနိုင်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်အကျိုးကျေးဇူးများ, ခံစားခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည် အတော်လေးအကြိမ်အနည်းငယ်ကြောင့်တစ်လ။
စက်တင်ဘာလအကုန်စက်တင်ဘာလအကုန်လောက်မှာကျနော့်သူငယ်ချင်းကကျွန်တော့်ကို nofap အကြောင်းရေးပြီးစာကိုဘယ်လိုကြိုးစားသင့်တယ်ဆိုတာရေးတဲ့အခါမှာတော့ငါတကယ်စစ်မှန်တဲ့ရိုးသားတဲ့ကြိုးပမ်းမှုကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ပထမ ၇ ရက်ကပုံမှန်အားဖြင့်သွားတယ်။ စွဲလမ်းမှုအတွက်ငါတောင့်တတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့နေရာမှာသွားတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ငါနေ့ရက်တွေနည်းလာတယ်၊ အခုတော့ dopamine အလုအယက်ရဖို့အလန့်တကြားအော်ဟစ်နေမယ့်အစား၊
ငါအခု ၁၈ ရက်ရောက်နေပြီ။ နောက်ဆုံး ၂ ရက်၊ ၃ ရက်လောက်လောက်မှာဒီ shit ဟာနောက်ဆုံးတော့စနေပြီ။ ငါတနေ့လုံးစိုက်ထူရဖို့ငါစတင်နေပြီနံနက်စိုက်ထူငါဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်နောက်ဆုံးသုံးရက်။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၃ နှစ်ရှိပြီးအပျိုဖော်ဝင်ခြင်းကိုထပ်မံအလားအလားခံရသည်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ငါဟာလူတစ်ယောက်လိုခံစားလာရပြီ။
Flatlining လုံးဝစို့ပေမယ့်သင်ကမှတဆင့်ကပ်နှင့်သင်၏ ဦး ခေါင်းကိုတက်ထားသင့်တယ်။ ငါဟာဒီစွဲလမ်းမှုကိုတိုက်ဖျက်ဖို့နောက်ဆုံးကာလမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာသေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အခုငါအဲ့ဒီဆေးစွဲတာကိုခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ကြိုးစားနေတယ်။
ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့တာကကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ nofap မှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတာပါ။ မဟုတ်ရင်ငါပထမနေ့ကစပြီး nofap reddit ကိုသွားလည်တာပါ။ တကယ်တော့ဒီနေရာကိုပြတဲ့ငါ့သူငယ်ချင်းပဲ။ ဒီအပြင်အခြား, အအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းကိုယူ။ ထွက်အလုပ်လုပ် ဦး လှုံ့ဆျောထိန်းသိမ်းထားအပေါ်အများကြီးကူညီပေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည် fap နှင့်လုံးဝမဝေးပါ။ ကျန်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ur ခရီးစဉ်အပေါ် gl hf ။
ဂေးအမျိုးသား ၃၅ နှစ် - ၅၂ ရက်အကြာမှာအောင်မြင်မှု!
ဒါကငါ့ဂျာနယ်ကနေ repost ဖြစ်ပါတယ် ၎င်းသည်ကွန်ဒုံးနှင့်ထိုးဖောက်ပြီးလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် ၂ ရက်အကြာတွင်ဖြစ်သော်လည်းအချိန်မတန်သေးသောသုက်လွှတ်မှုကိုခံစားနေရသည်။ ဒီပတ်ပတ်လည်အဘယ်သူမျှမ PE နှင့်တစ်လျှောက်လုံးခက်ခဲ!
အောင်မြင်ပါပြီ !! - 52 PMO, 17 MO ကို:
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ဒုံးနှင့်ထိုးဖောက်သောလိင်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး PE (သို့မဟုတ် DE) မှမခံစားခဲ့ရပါ။ အတော်ကြာအနေအထားပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူအားလုံးရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်း 15 မိနစ်ကြာခဲ့သည်။ ငါက ၇၀% ခက်ပေမဲ့အစပဲရှိသေးတယ်။ ငါအိုဟင်ကိုမစီစဉ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါအဆုံးသတ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အောင်မြင်ခဲ့တယ်။
မိနစ် ၂၀ လောက်လှည့်စားပြီးစကားပြောပြီးနောက်မှာကျွန်မရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကသူကနောက်ထပ်ရွေ့ချင်တယ်လို့ပြောပေမယ့်ကျွန်တော်တို့မှာကွန်ဒုံးတွေမရှိခဲ့ဘူး။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရပ်လိုက်တယ်၊ အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်၊ စတိုးဆိုင်ကိုသွားတယ်၊ ပစ္စည်းတွေ ၀ ယ်ပြီးပြန်စဖို့ပြန်လာတယ်။ ဖျော်ဖြေဖို့ဖိအားတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဝယ်လိုအားကိုတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူနိုင်သည့်အစွမ်းသည်စတိုးဆိုင်သို့မသွားမီကကျိန်းသေနည်းသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်လုံလောက်စွာရရှိခဲ့သဖြင့်အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားသည်။ ကျွန်ုပ်အံ့သြမိသည်။
ငါနင်ညင်သာသာ rewiring လုပ်ဖို့စီစဉ်နေတုန်းပဲ။ ငါဟာအရမ်းလန်းလန်းလန်းလွင့်လွင့်လွင့်လွင့်လွင့်လွင့်မသွားဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုလောင်ကျွမ်းစေချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီအောင်မြင်မှုကငါမျှော်လင့်ထားတာထက်စောပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပျော်ရွှင်သည်။ လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူနိုင်စွမ်းသည်မည်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်ကိုကျွန်ုပ်သိလိုပါသည်။ ငါထင်တာကတော့ဒါကတိုးတက်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါစောင့်ကြည့်ရတော့မယ်။
တစ်ခုမှာနောက်ဆုံးစကားလုံး။ ဒါကချိတ်ဆက်စရာမလိုပါဘူး၊ မရင်းနှီးသောလူတစ်ယောက်နှင့်ဖိအားမြင့်မားသောအခြေအနေမျိုးတွင်ကျွန်ုပ်သည်အခြေအနေကောင်းကောင်းရလိမ့်မည်ဟုမထင်ပါ။ ဒီလူကိုအခု ၂ လလောက်ငါလာတွေ့ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝအကြောင်းကိုအလွန်ရင်းနှီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစတင်မျှဝေခဲ့ပါသည်။ ငါသူ့ကိုသီးသန့်ချိန်းတွေ့ဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပေမယ့်ငါတို့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဂရုစိုက်ကြပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုရှိသည်။
ကျွန်တော့်အောင်မြင်မှုတော်တော်များများကဒီအခြေအနေမျိုးကိုကြည့်ပြီးဒီလူတစ်ယောက်အတွက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူချိတ်ဆက်နိုင်သည့်ကွင်းဆက်များကိုကျွန်ုပ်မလိုလားပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အလိုရှိပါက ၁၀၀% အလုပ်လုပ်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်သည်ရံဖန်ရံခါတစ်ခုရှိနိုင်သည့်နေရာအထိရောက်နိုင်ရန်လိုပါသည်။
နေဆဲမကြာခဏတစ်ဦးနှောက် rewire ပြီးနောက် masturbating မပါဘဲ porn ကိုချောင်းမြောင်းသူမည်သူမဆို?
ငါယခုနှစ်အစဦး၌ Nofap အပေါ်မှာငါ့ 90 နေ့က rewire ကိုပြု၏။ ကိုယ့်လိင်2သို့မဟုတ်3ကြိမ်ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ကိုယ့်လုံးဝကိုငါ့ဦးနှောက် rewire မှစီမံခန့်ခွဲသင်တန်းကာလအတွင်း ED ဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်အရာခပ်သိမ်းဒဏ်ငွေခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ PMO အလွဲသုံးစားမှုငါ့ကိုနေဆဲ။ ဒါပေမယ့်အရင်တုန်းကလိုမျိုး porn ကကျွန်မကိုသဘောမကျပေမယ့်ပျင်းသောအခါစိတ် ၀ င်စားသောအခါ dopamine level ကိုမြှင့်တင်ရန်စောင့်ကြည့်နေတုန်းပါ။ စိတ် ၀ င်စားစရာကငါကြည့်နေစဉ်အတွင်းသုက်လွှတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါအဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုသိနေသောကြောင့်။ ကိုယ့်ဟာ ၅-၁၀ မိနစ်လောက်နည်းနည်းအနားယူပြီးမကြာခင်ရပ်လိုက်တယ်။ မည်သူမဆိုအတူတူပင်ပြproblemနာရှိပါသလား
ငါဒါကိုရပ်တန့်စေချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့ porn နဲ့ edging တွေကငါ့ရဲ့ dopamine အဆင့်ကိုတကယ်မြှင့်ပေးပြီးငါ့ကိုပိုပြီးပျော်ရွှင်စေတယ်။ ငါအကူအညီအချို့ရှာတွေ့ဖို့ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်။
Edit: ဦးနှောက်ကို rewire ပြီးနောက်ကိုယ့်ကိုထပ် masturbating စတင်ခဲ့ပေမယ့်ကိုယ့်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲထိုသို့ပြုကြ၏။ ငါအခုအချိန်မှာအတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတိအကျအခွအေနေကိုသိရန်သင်တို့အဘို့အကြောင်းပြောပါဖို့လိုအပ်ကြောင်းထင်
ED သွေးဆောင် Porn နှင့်အတူ 18
ကျွန်တော့်အသက်က ၁၈ နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကြွယ်ဝသောကြွက်သားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ၁၈ နှစ်အရွယ်ထက်ပိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျန်းမာသောနေထိုင်မှုပုံစံနှင့်သန့်ရှင်းသောအစားအစာများရှိသည်။ ငါသည်မည်သည့်ညစ်ညမ်းမှုကိုမဆို ၄-၅ လခန့်အခမဲ့ခံခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးကြည့်ခဲ့သည့်တစ်ကြိမ်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ငါလိင်တံကိုညစ်ညမ်းစေတဲ့ ED ရောဂါခံစားနေရတာနှစ်နှစ်ခွဲရှိပါပြီ။ ကျောင်းကထွက်လာပြီးအမျိုးသမီးသိပ်မများတဲ့ကောလိပ်ကျောင်းတက်တုန်းကပါ။ ဒါကြောင့်အများအားဖြင့်ယောက်ျားတွေတစ်ခုအင်ဂျင်နီယာကောလိပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါအသည်းအသန်ကြက်တစ်ကောင်နှင့်အတူအပျိုစင်ဘ ၀ ကိုချိုးဖောက်သည့်ပထမဆုံးကြောက်မက်ဖွယ်အတွေ့အကြုံမကုန်မှီတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်သည်အပြာနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမည်မျှစွဲလမ်းကြောင်းတောင်မှမသိခဲ့ပါ။ အဲ့ဒီကနေတောင်ကုန်းပေါ်ကိုဆင်းသွားပြီးကျွန်မမှာပူပြင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးမှာကျရှုံးခဲ့တယ်။ ငါမကြာမီစိတ်ဓာတ်ကျဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရယ်စရာအပိုင်းက porn မတိုင်ခင်ငါဟာအရမ်းကိုချိုလွန်းပြီးခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုလိုက်ဖမ်းလိုက်တာပါပဲ။ ငါနင့်ကိုနင့်ကိုချစ်စေချင်တယ်ချစ်သူရယ် ငယ်ငယ်တုန်းကငါမှားနေတာတစ်ခုခုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာ porn မတိုင်ခင်ကလိုမိန်းမလိုအရူးတွေလို့ထင်ရလို့ပါ။
ဒါကြောင့်ငါအရမ်းခက်ခဲခဲ့ပေမယ့်ကိုယ့်နောက်ဆုံးမှာငါအရှုံးမပေးခဲ့ကြလို့ပြောဂုဏ်ယူပါတယ်သော porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကိုစွန့်လွှတ်စတင်ခဲ့သည်။ ငါမကြာသေးခင်ကမှပဲငါဟာပူပြင်းတဲ့ကြက်တစ်ကောင်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နောက်ပြfailedနာတစ်ခုကြုံလာတဲ့အခါ ဦး နှောက်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအကြောင်းဖတ်ပြခဲ့တယ်။ အပျိုစင်ဘ ၀ ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ပြီဆိုပေမဲ့ငါမှာမိန်းကလေးတွေနှင့်အတူ ED ရှိနေတုန်းပဲ ငါတကယ်ချစ်သောမိန်းကလေးနှင့်ဆက်ဆံနေပြီးသူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံသော်လည်း Vigora (ED အတွက်ဆေးလုံး) ၏အကူအညီဖြင့်သူနှင့်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ငါသူမကိုနှင့်အတူကြိုးစားပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ငါပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ငါ vigora ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သောအခါပါပဲ။
ငါထင်တာကတော့ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီလို့ထင်ပေမယ့်မကြာခင် vigora ကိုဖြတ်ထုတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်။ ငါမလိုချင်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ တက် fucked ရဲ့၎င်း၏ရုံငါ့ ဦး နှောက်။ ငါလိုချင်တဲ့နောက်ဆုံးအရာကဒီမိန်းကလေးနဲ့အတူအရာတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးစိတ်ဓာတ်ကျစေတယ်။ ကိုယ့်ကိုပုံမှန်ပြန်ရဖို့အခုအချိန်မှာငါဘာမှမသုံးနိုင်တဲ့လူတွေကိုကူညီပါ။ ။
ကိုယ် im သူမ၏ touch နှင့်အနမ်းဖို့ပိုအထိခိုက်မခံခဲ့တယ်ထက်အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုပေမယ့်ကိုယ့်ကိုကျော်ဒီ 100% လာရန်လိုအပ်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ့်တစ်ဦးတည်းမဟုတ် im နှင့်အကူအညီနဲ့ငါ့ကိုအရမ်းပိုကောင်း Ive အစဉ်အဆက်မတိုင်မီမည်သူမဆိုဤအကြောင်းကိုပြောပြီဘယ်တော့မှအဖြစ်ခံစားမိစေသည်ရနိုင်ကိုသိရှိရာကဒီဖိုရမ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်း။ လူတွေကကိုယ့်ကိုကိုယ်လုံးဝဒီကိုကျော်လွှားရန်ဘာလုပ်သင့်ကိုပိုမိုသိလိုခြင်းနှင့်အခြားမည်သည့်အကြံပေးချက်များနှင့်အကြံဉာဏ်ကိုတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်ဟုကူညီဖို့ပါ။
ချစ်သူများနေ့၏အမှတ် NoFap အောင်မြင်မှုပုံပြင်
ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာနားထောင်သူ၊ လတ်တလော NoFap စိန်ခေါ်မှုမှာကျွန်ုပ်သည် ၁၄ ရက်နေပါပြီ NoFap ကဲ့သို့ငါ့ကိုအခြားသူများအားလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်း၏မျှော်လင့်ချက်၌ငါ့အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေရန်ယနေ့ငါရေးလိုက်သည်။
NoFap I PMO ကိုမစဉ်းစားမီလွန်ခဲ့သောခြောက်နှစ်အတွင်းတစ်ပတ်လျှင် ၅-၆ ကြိမ်တသမတ်တည်းရှိခဲ့သည်။ တကယ်တော့ငါ5ရက်သွားပြီနောက်ဆုံးသောကာလကိုမမှတ်မိဘူး NoFap ကိုမတွေ့မချင်းဒီအလေ့အထကငါ့ ဦး နှောက်ကိုထိခိုက်စေတယ်လို့တောင်သံသယမဝင်ခဲ့ဘူး။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်ပထမ ဦး ဆုံးသော ED ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းတွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ပထမအကြိမ်အဖြစ်အပျက်နှင့်နောက်ဆက်တွဲမတော်တဆမှုများသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်မကြာခဏ PMO ပေါင်းစပ်မှုမှဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ငါပထမ ဦး ဆုံး ED မတိုင်မီ (ငါ့အလိပ်တစ်ကွန်ဒုံး၏ဖော်ပြချက်အပေါ်အခွံလိမ့်မယ်), ငါကွန်ဒုံးသုံးစွဲဖို့ဘယ်တော့မှပါပြီ။ ငါအမြဲတမ်းတ ဦး တည်း hit အံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဖွင့်မခံခဲ့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နံနက်လိင်ရွေးချယ်စရာဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။
နေ့များငါနဲ့ငါတွေ့နေတဲ့ဒီမိန်းကလေးအတွက်ငါအတွက် Valentine Day ကိုစီစဉ်ခဲ့တယ်။ ချက်ချင်းပဲစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်မှုစတင်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ပူမိတယ်၊ ငါဆန္ဒရှိရင်တောင်စိုက်ထူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးမိတယ်။ သင်တို့အများစုသိကြသည့်အတိုင်း၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုကျေပွန်စေသောပရောဖက်ပြုချက်ဖြစ်လာသည်။ သုံးရက်အတွင်းငါနာရီပေါင်းများစွာစိတ်ပူခဲ့တယ်။ အဲဒါကကျွန်မရဲ့အတွေးတွေကိုလွှမ်းမိုးပြီးဒီတင်းကျပ်တဲ့ထုံးကိုငါ့ရင်ဘတ်ထဲအတင်းဖိအားပေးခဲ့တယ်။
မနေ့ကအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မရဲ့အထူးအမျိုးသမီးဟာအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအချစ်ရေးညနေခင်းတစ်ခုရှိခဲ့ပြီးကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ကြိမ် ကွန်ဒုံးနှင့်အတူ။ တဖန်ဤသည်နံနက်။ ငါဟာကိုယ့်ခေါင်းကိုမဟုတ်ဘဲယခုအချိန်တွင်အနားယူပြီးအနားယူခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့ငါနှစ်ပေါင်းများစွာရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ပြfromနာကနေသက်သာရာရခဲ့တယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားစွာငါခရီးကိုဆက်လက်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် NoFap ။
ရုံတစ်ခုလုံးကိုအချိန်စိုက်ထူ, SO ဒီနေ့လယ်နှင့်အတူရှိ၏, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမိတော့မှ, ငါတစ်မျောက်ကဲ့သို့ရိုင်းနှင့်လုံ့လရှိသူဖြစ်ခဲ့သည်။ တကယ်ပဲအစွမ်းထက် O. ပုံမှန်အားဖြင့်ငါ arousal များအတွက်ပြင်းထန်သောလေဖြတ် ယူ. အိပ်ရာ၌ငါ့ကိုစိုးရိမ်စေလိုတဲ့ကျမဲ့လိင်တံရှိသည်လိမ့်မယ်။ အခုတော့ငါကမျောက်နဲ့တူဖြစ်ခြင်းကြိုက်တတ်တဲ့။
ကိုယ့်သိတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုကောင်လေးစဉ်းစားတာကနေတစ်ပိုင်းတစ်စစိုက်ထူတာနဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်တာပဲ။ ငါစိုက်ထူရဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိခဲ့ဘူး။ ငါသည်ငါ့အကြံအစည်နှင့်အတူလုပ်ခဲ့တယ်။ သန့်ရှင်းသော။
Dude, ဒီ shit အစစ်အမှန် fucking ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မှာစုစုပေါင်းရက်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း (တစ်လအောက်) အတွက်အလွန်ကြီးမားသောအနိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ငါနေ့တိုင်းပို။ ပို။ ပြန်လည်ထူထောင်တာနဲ့တူငါစာသားခံစားရတယ်။ ငါဟာလူများစွာထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့အမြဲတမ်းထင်ခဲ့တယ်၊ ငါအရမ်းစိတ်ရှုပ်တာတောင်မှစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတယ်၊
ငါစိတ်လှုပ်ရှားမိလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအခုချက်ချင်းထွက်မပြေးချင်ဘူး။ ငါ၌ DGS ရှိသည်။ ငါခံစားချက်အသစ်တစ်ခုကိုပြန်လည်ဖြုတ်ပစ်လိုက်သလိုခံစားရတယ်။ ငါ၏အ Dick ဆယ်စုနှစ်ကြာမြင့်သောမေ့မြော၌ဖြစ်သကဲ့သို့ငါခံစားရတယ် & ငါကအဆင်ပြေထင်ခဲ့တယ်။ သတောပဲ။
ငါ nofap စတင်လာတဲ့အခါငါ့အလိင်ဘဝကိုလေးလေးနက်နက်နာကျင်ခံသောကြောင့်ငါပြု၏။ ငါတော်တော်များများမိန်းကလေးခဲ့ကြပေမယ့်လိင်အကြှနျုပျအဘို့ကြောင်းပျော်စရာဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ အချိန်နှင့်အမျှပြုလုပ် သွား. ငါညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲမှာအားလုံးအနေနဲ့အော်ဂဇင်ရှိသည်မဟုတ်နိုင်ရှိရာမကြာသေးမီကသည်အထိဆိုးရွားများနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားရဖို့ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ငါအရင်က nofap ကို“ ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါ porn ကိုမကြည့်ခဲ့ဘူးဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုကြည့်ရှုရန်လင့်များချွေတာခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်မယ့်အစား chive မှာရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့ပုံအားလုံးကိုကြည့်မယ်။ ငါ့ဘဝမှာအပြောင်းအလဲအများကြီးမတွေ့ရလို့စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်။ ငါပြrealizeနာတွေကိုရှောင်ပြီးသူတို့ကိုမရင်ဆိုင်ဘူးဆိုတာအခုတော့သဘောပေါက်လာပြီ။
ငါဘဝကိုပိုကောင်းအောင်ပြောင်းလဲဖို့၊ ငါ့ရဲ့ပြproblemနာကိုရင်ဆိုင်ဖို့နဲ့အဲဒါကိုအနိုင်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ၊ ညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံ၊ ပုံရိပ်တွေ၊ လန်းဆန်းမှုမရှိတော့ဘူး။ ၈ ရက်စစ်မှန်သော nofap ပြီးနောက်လိင်ဘယ်တော့မှပိုကောင်းလာပြီးကျန်အရာများကတော့ ငါ့ဘဝလည်းပြောင်းလဲနေပြီ၊ စိတ်ဓာတ်ပျော့ပြောင်းလာပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ပြီး၊
အကျိုးကျေးဇူးတွေကတကယ့်ကိုကောင်းတယ်။ ငါ porn နဲ့ fapping ကြောင့်ဘာပျောက်နေလဲဆိုတာကြည့်ရတာစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ အားကြီးသောညီအစ်ကိုတို့၊
အကြှနျုပျ၏ ED ကုန်ပြီ !!
ကျွန်ုပ်၏ ED နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုရှာဖွေစဉ် Nofap ကိုထိမိခဲ့သည်။ ငါ PMO စွဲဘူးမဟုတ်ပေမယ့်ငါလုံးဝလွန်း masturbate လေ့ရှိတယ်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ငါလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်၊ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်လေဖြတ်ချိန်၌မိမိကိုယ်ကိုအားလျော့နေပြီးအလွန်ရှက်စရာကောင်းသည်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါဒီဟာဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာလဲဆိုတဲ့အချက်အလက်ကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့တယ်။ ငါ၏အလိင်တံ desensitized ခဲ့သည်ထွက်လှည့်, ဒါကြောင့်ကိုယ့်အဘယ်သူမျှမ fap မိသားစုအားလုံးနှင့်အတူဤခရီးစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ငါစုစုပေါင်း7ရက်, ထိမိ။ မနှင့် porn မပြု၏။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမိသည့်တစ်ခုတည်းသောအချိန်မှာ lotion ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည် (၎င်းသည် sensitivity ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ကြောင်းတစ်နေရာတည်း၌ဖတ်ရှုပါ) ။ ဒါကြောင့်စနေနေ့လွန်မှသာကျွန်ုပ်သည်ကောလိပ်ရှိသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သို့လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးလိင်ဆက်ဆံခြင်းအဆုံးသတ်ခဲ့သည် ငါထပ်ထည့်မယ် ငါပထမတော့သံသယရှိပေမယ့်တကယ်အလုပ်လုပ်တယ်။ ငါမကြာခဏတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသောကြောင့်, ငါလိင်ခံစားခဲ့ရသောအရာကိုမေ့လျော့ခဲ့သည်ထင်ပါတယ်။ ငါကဒီကိုထုပ်ပြီးမင်းကိုကျေးဇူးတင်ချင်တာပါလို့ပြောတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၇ ရက်သာနေခဲ့ပေမယ့်ငါနေ့တိုင်းအားပေးမှုအတွက်ဆိုက်ကိုလာလည်ပတ်ပြီးဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရေးအများကြီးရခဲ့တယ်၊ ယောက်ျားတွေအပေါ်စောင့်ရှောက်အပေါ်စောင့်ရှောက် !! မင်းကအရမ်းအားသန်တယ် !!
Reboot ၏လအနည်းငယ်အကြာတွင် ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေမယ် PE ရှိနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
လအနည်းငယ်ပြန်လည်လည်ပတ်ပြီးနောက် (၇ လမှ ၈ လခန့်အကြာတွင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်လုပ်မိခဲ့သည်) ပြီးနောက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောကျွန်ုပ်၏ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသလိုက်သည်။ ငါတောင်မှနံနက်သစ်သားပုံမှန်စတင်ခဲ့တယ်။ ငါ porn မကြည့်ချင်တော့ဘူး။ ငါကကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့စမ်းကြည့်ရတာအရမ်းကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပေမယ့်ကံမကောင်းတာကတော့ငါဟာအခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူး။ စူးစမ်းလိုစိတ်ကြောင့် porn မပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်မှာခိုင်မာတဲ့စိုက်ထူမှုရှိခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်ဟာ ၅ t ၆ ကြိမ်အတွင်းမှာသုတ်ရည်ထုတ်ယူခဲ့တယ်။ ရှည်လျားတဲ့ reboot ပြီးရင်အများကြီးကြာလိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်နေတဲ့အတွက်ဒါဟာတော်တော်စိတ်ပျက်စရာပဲ။
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်လိင်ကိုနှစ်သက်သောသူတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူမသည်အိပ်ရာပေါ်ရှိအရာအားလုံးကိုကြိုးစားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ယခုငါလိင်ဆက်ဆံရန်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုရရှိလာပါကကျွန်ုပ်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါကအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။
ဘယ်သူ့ကိုမှငါအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ဖယ်ရှားပစ်ရကြဘူးဘယ်လိုငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလား? ငါ masturbate နေချိန်မှာဒါဟာအမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်ကဖြစ်ပျက်မည်, ဖွစျခဲ့သလဲ
NoFap ငါ့ကို beastmode သွားနှင့်နောက်ဆုံးတော့ငါ့အ gf ကျေနပ်အောင်ကကူညီပေးခဲ့
ဒါနဲ့ fuck ဆိုတဲ့ porn ဆိုသညျကားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ထိုနောက်မှငါသည်ပြီးခဲ့သည့်လကသည် shit ဖြတ်။ ဒီမတိုင်မီကငါသည်ငါ့မှာသဘာဝယန္တရားနဲ့ငါ့ serotonin နဲ့ fuck ဆိုတဲ့ blasting, တစ်နေ့လျှင် 2-3 နာရီအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်နေ့အချို့ dank porno အပေါ်ထွက် fiend မှသုံးပါ။
ငါ unconfident antisocial fuck ဆိုတဲ့ tard ဖြစ်ခြင်း၏ပင်ပန်းတာ pixel tits မှာစိုက်ကြည့်အချိန်ဖြုန်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ testo သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့သောအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့်အချိန်တွင်ယခုသီတင်းပတ်အတွင်းထပ်တိုးပါ။ သန့်ရှင်းသောအ shit ။ ငါ၏အ gf မီးဖိုချောင်တဝိုက်လမ်းလျှောက်စောင့်ကြည့်ငါ့ဒစ်ခဲယဉ်းခဲ့သည်။ ငါကိုယ်တိုင်မဆံ့နိုင်ဘူး ငါသူမကိုဆှဲနှင့်ငါတို့အခန်းသို့ခေါ်သွားတယ်။ ငါ့မှာအခက်ခဲဆုံးစိုက်ထူမှုကို ၂- နာရီကြာအောင်ဆက်လုပ်ပါ (ဒီတော့အရမ်းကိုခက်ခဲလွန်းလို့ကျွန်မရဲ့ဒစ်ကပြုတ်ကျတော့မယ်လို့ထင်ခဲ့တာ - tbh အဆင့်အချို့မှာမသက်မသာဖြစ်ခဲ့တယ်) ။
ဒါပေမယ့်မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ငါ levl 99 တော်ပီဒိုဗုံးကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ငါအရင်ကသူမကိုပြောခဲ့ဖူးတာထက်ငါ့ gf ကိုပိုစူးစိုက်သည်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်၏ဒစ်ဘယ်လောက်ကြီးပြီးသူမကိုယ်တိုင်မဆံ့နိုင်ကြောင်းအော်ဟစ်နေသည်။ (obv အကြောင်းရင်းကငါအမြဲတမ်းတုန်လှုပ်နေတတ်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါကဘယ်တော့မှ ၁၀၀% အာရုံမစိုက်ခဲ့ဘူး)၊ ဒါပေမယ့်အခုငါကအင်အားကြီးဖျက်စက် mode ဖြစ်နေပြီ၊ သူမကိုယ်သူမကိုင်တွယ်နိုင်ဘူး ။ သူမ၏ cum ကိုသုံးကြိမ်တကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ငါခွံမာသီးကိုခုတ်ထွင်လိုက်သောအခါသူမသည်အလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးခဲ့သည်။
သင်အမှန်တကယ်လူတဖြစ်, တစ်ရှင်ဘုရင်ကဲ့သို့ fuck ဆိုတဲ့ချင်လျှင်, pixels ကိုစိုက်ကြည့်ရပ်တန့်နှင့်အပြည့်အဝ jedi သွားပါ။
ကျွန်မပတ်ပတ်လည်2အဘို့အသွားစဉ် / ငါ့ကို Excuse
ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်နှစ်ခု (ယခင်လတွင် 6) ရှိနိုင်ပြီးကြီးမားသောတိုးတက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးထိုနံနက်နှင့်ညနေပိုင်းတွင်စာမက်ဆေ့ခ်ျမှတဆင့်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်စကားပြောရန်ခက်ခဲနေသည်။ nofap မတိုင်မီကငရဲတွင်လမ်းမရှိသောကြောင့်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုစာတိုပို့ခြင်းမှခဲယဉ်းနိုင်သည်။ ပြီးတော့အစောပိုင်း nofap ထဲကိုငါစိုစွတ်နေတဲ့အိပ်မက်တစ်ခုတည်းကနေတစ်ပတ်လောက်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ပတ်လောက်နေခဲ့တယ်။
နောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်သည်မတ်တပ်ရပ်နေစဉ်စိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်dstruggle တကယ့်ကိုရုန်းကန်နေရပြီးကျွန်ုပ်သည်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မှန်မှန်ရှိနေပါကတစ်ဝက်သောအရာတစ်ခုကိုရရှိသည်။ ယခုတွင်၎င်းကိုကျွန်တော်ကစားနိုင်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်တစ်ခုတည်းဖြင့်စိုက်ထူခြင်းကိုရနိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၁-၂ လကပင်ဖြစ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ငါအမြတ်အစွန်းအများကြီးရခဲ့တယ် ငါပြန်ရောက်မလာသေးပေမယ့်ငါဘယ်လောက်တိုးတက်မှုရခဲ့သလဲဆိုတာကိုအံ့သြမိတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။
45 ရက်ပေါင်းငါ၏အလိင်တံထိကအပြည့်အဝစိုက်ထူခဲ့သည်ငါသည်ငါ၏နောက်ဆုံးလိင်တှေ့ဆုံသာအတွေးနှင့်အမှတ်တရများနဲ့တူသောစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်သာညင်သာစွာငါ porn မရှိဘဲရေချိုးခန်းအတွင်းအပြည့်အဝစိုက်ထူရဖို့နိုင်ခဲ့သည်ကို restart နှင့်မနေ့က, သာ 45 days ago မဖြစ်နိုင်ပါပြီမယ်လို့တစ်ခုခု။
45 ရက်ပေါင်းလွန်ခဲ့သောစိုက်ထူလာနှင့် go (ED) နှင့်က ejaculate မှအစဉ်အမြဲယူလိမ့်မယ်လို့ဒါပေမဲ့အခုအမှုအရာအကြီးအသွားကြသည်ပုံရ !! ငါဤမျှလောက်များစွာသောကြီးမြတ်အကြံဥာဏ်ပေးခြင်းများအတွက်လူတိုင်းကျေးဇူးတင်ချင် !!!
ငါကျော်ရှိနေတတ်တယ်မသိပေမယ့်အနာဂတ်မှာတောက်ပကြည့် !!! ကြှနျုပျတို့အားလုံးမှကံကောင်းပါစေ !!!